Timothy Dunn, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Waaxda Injineeriyada Biomedical, Jaamacadda Duke
Qiyaaso badan oo Seddex Cabbir Dhaqan oo Shakhsiyadeed iyo Kooxo Bulsho
Hababka hadda jira ee lagu cabbiro dhaqdhaqaaqa xayawaannada sida xorta ah u dhaqma waxay leeyihiin xaddidaad: Kormeer aad u faahfaahsan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada yaryar ee xayawaanka (tusaale ahaan hal lambar) waxay u baahan yihiin dhaqdhaqaaqyo xaddidan. Barashada dabeecadda si xor ah u dhaqdhaqaaqda meel bannaan oo 3D ah badanaa waxay ka dhigan tahay xaddididda xallinta, laga yaabee inay raadraacdo booska guud, ama ku tiirsanaanta tilmaanta goobjoogaha. Raadinta fiidiyaha otomaatiga ah ee xayawaanku caadi ahaan waxay u baahan tahay jawi aan dabiici ahayn, fudud, iyo qaybaha jirka ee aan kaamirooyinka muuqan si sax ah looma raadin. Saadaasha Sirdoonka Artificial-ka sare (AI) ee ku aaddan meelaha waaweyn ee saddexda-cabbir leh iyadoo la adeegsanayo matalaadda baaxadda mugga leh, farsamadii dhowaan la sameeyay si looga gudbo arrimahan, waxay u baahan tahay awood xisaabineed oo ballaaran. Ku -daridda xayawaanno badan indha -indheynta bulshada waxay soo bandhigaysaa arrimo dheeri ah.
Natiijo ahaan, waxaa jira helitaan liita xogta aadka loo doonayo: Xallinta sare, raadraaca tooska ah ee xayawaanka ee goobta 3D ee fulisa dabeecadaha dabiiciga ah, keligeed ama koox ahaan, iyo qiyaasidda dhaqdhaqaaqaas qaab qaabaysan. Dr. Dunn wuxuu ka shaqeynayaa hab cusub oo ujeeddadiisu tahay in la soo dhoweeyo habboonaantaas. Iyada oo laga dhisayo barashada mashiinka mashiinka-barashada mashiinka joometeri-ga 3D ee kooxdiisu u adeegsan jirtay inay si weyn u wanaajiso saxnimada saadaasha, Dr. Dunn iyo kooxdiisu waxay hadda ka shaqeynayaan sampling image-ka soo noqnoqda ee la-qabsiga (ARIS) oo isku dara sawirrada kamaradaha badan si ay u dhisaan moodel wuxuu qiyaasi karaa oo saadaalin karaa booska jirka ee miisaanka badan, xitaa marka qayb (sida cudud ama lug) aan si toos ah loo arki karin.
ARIS waxay si xushmad leh u hagaajisaa xallinta astaamaha jirka ee cabbirka leh, waxayna adeegsataa qaabaynta saadaalinta iyadoo lagu saleynayo waxa ay ka ogaato mowduuceeda (habeynta iyo dhererka addimada, sida ay isugu xiran yihiin, sida ay u dhaqaaqaan, iwm.) xogta tababarka ee jiirrada sida xorta ah u dhaqma ka dibna si fiican loo habeeyay iyadoo la adeegsanayo xogta tababarka ee noocyada kale-in diiradda la saaro qaybta bannaan ee laga yaabo in qaybta jirka ay noqoto. Tani waxay adeegsanaysaa awood xisaabeed aad uga yar qalabkii hore ee mugga ahaa ee 3D. Cilmi -baaristiisa, Dr. Dunn wuxuu hirgelin doonaa ARIS wuxuuna xogta ku duubi doonaa miisaanno kala duwan, laga soo bilaabo booska guud iyo hoos -u -socodka dhaqdhaqaaqa astaamaha wanaagsan ee gacmaha, cagaha, iyo wejiga. Cilmi -baaris dheeraad ah ayaa sahamin doonta wax -ku -oolkeeda iyada oo xayawaanno badan ay is -dhexgalaan. Awooddan lagu cabbiro hab -dhaqanka qaab cusub oo sax ah ayaa saamayn ballaaran ku leh barashada cilladaha neerfaha ee saameeya dhaqdhaqaaqa, isku -xirka dhaqdhaqaaqa maskaxda iyo dabeecadda, iyo barashada is -dhexgalka bulshada.
Jeffrey Kieft, Ph.D., Professor, Waaxda Biochemistry iyo Genetics Molecular, Jaamacadda Colorado School of Medicine
Teknolojiyad Cusub oo Xakamaysa Qoraalka
Messenger RNA, ama mRNA, waxaa loo aqoonsaday inuu yahay kaalin muhiim u ah nolosha iyo caafimaadka unugyada. Moleekuleyaasha RNA waa sheybaarada lagu sameeyo borotiinka, waxaana lagu dhex abuuray unugyo si ay tilmaamo ugu qaadaan mashiinnada samaynta borotiinka, ka dibna waxaa burburiya enzymes. Wadarta mRNA ee noole muujiyo waxaa lagu magacaabaa “transcriptome”.
Cilladaha ku jira mRNA iyo RNA-ka-koodh-la'aanta (ncRNA) waxay ku xiran yihiin qaar ka mid ah cudurrada neerfaha iyo neurodevelopmental. Haddii ay aad u yar tahay mRNA gaar ah ama ncRNA ee qoraalka qoraalka, shaqooyinka gacanta qaarkood ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacaan ama naafo noqdaan. Dr. Kieft wuxuu sahaminayaa hab cusub oo lagu maareeyo qoraalka qoraalka isagoo hoos u dhigaya suuska mRNA iyo ncRNA. Ogaanshaha in qaar ka mid ah enzymes-ka burburiya RNA-yada ay asal ahaan “ruugaan” gees ilaa gees, Dr. Kieft wuxuu adeegsaday fahamkiisa sida molecules-ka RNA loo qaabeeyey oo isku laalaabmay si loo abuuro gabal injineernimo ah oo u adkaysta RNA (xrRNA) oo , markii loo soo bandhigay mRNA ama ncRNA ee la jaanqaadi kara, waxay isku daraysaa oo isku laabanaysaa si ay u samaysmaan qaab dhismeed “xannibaya”, oo macno ahaan u beddelaya qaabkii RNA -ga oo gelinaya horjoogsi joojinaya enzymes -ka jidadkooda.
Iyada oo hoos u dhigaysa burburka bartilmaameedka mRNA iyo ncRNA, Dr. Kieft wuxuu arkaa fursad uu ku maareyn karo badnaantooda qoraalka dhexdiisa. XrRNA -yada la farsameeyay waxay aqoonsan karaan bartilmaameedyo gaar ah, isku xira, oo abuuri kara ilaalin, sidaa darteed cilmi -baarayaashu waxay kordhin karaan saamiga bartilmaameedka iyagoon beddelin inta la abuuray. Qaabku wuxuu leeyahay faa'iidooyin ah inuu ka carqaladeeyo unugga martida loo yahay marka loo eego kor u qaadista mRNA ee aan caadiga ahayn, iyo saxnaanta xrRNA lagu farsameyn karo waxay suurtogal u tahay in la beegsado RNA-yo badan hal mar, oo laga yaabee xitaa inay oggolaato hagaajinta ganaaxa iyadoo si sax ah loo maareeyo heerka suuska. Dr. Kieft wuxuu u arkaa codsigan, oo ka dhashay sayniska aasaasiga ah ee baranaya RNA, inuu yahay aalad cilmi baaris oo awood u leh dhakhaatiirta neerfaha, iyo laga yaabee xitaa aasaaska daaweynta mustaqbalka fog.
Suhasa Kodandaramaiah, Ph.D., Kaaliyaha Professor Benjamin Mayhugh, Waaxda Farsamada Farsamada, Jaamacadda Mataanaha Mataanaha ee Minnesota
Robot-ka Caawiyay Duubista Maskax-Wide ee Jiirka Sida Xorta ah u Dhaqma
Khabiirada cilmiga neerfayaasha ee baranaya waxqabadka maskaxda inta lagu guda jiro dabeecadaha badiyaa waa inay sameeyaan is-dhaafsi: Waxay adeegsadaan dareemayaasha neural-ka madaxa-ku-dhejisan ee madaxa-ku-dheggan oo iftiin ku filan si loogu oggolaado xayawaanka mawduuca inuu u dhaqmo si xor ah, laakiin waa qaraar hoose ama ma kormeeri karo maskaxda oo dhan. Ama waxay adeegsadaan aalado aad u xoog badan, kuwaas oo aad ugu culus xayawaanka mawduuca waxayna u baahan yihiin xalal kale, sida dhaqdhaqaaq la'aan iyagoo u oggolaanaya xayawaanka inay ku socdaan treadmill, ama xitaa adeegsadaan khibradaha dhabta ah ee dhabta ah ee haddana xaddidaya dabeecadda maado.
Dr. Kodandaramaiah wuxuu la tacaali doonaa caqabadda isagoo leh qalliin qalfoof ah oo robotic ah kaas oo xambaarsan culeyska duubista neerfaha iyo qalabka kormeerka isagoo weli u oggolaanaya mawduuca (kiiskan inuu jiir yahay) inuu madaxiisa ku wareejiyo dhammaan saddexda darajo: 360 digrii oo dhammaystiran yaw (wareegga toosan) dhidibka, iyo ilaa 50 darajo oo dhaqdhaqaaq ah oo garoonka dhexdiisa ah iyo faasas duuban, inta uu ku dhex wareegayo garoon. Robot -ku wuxuu leeyahay saddex gacmood oo isku -dhafan oo loo habeeyay qaab saddex -geesood ah, oo laga joojiyay mowduuca oo lagu kulmo meesha madaxa lagu dhejiyo. Dareemayaasha buurta ayaa ogaan doona dhaqdhaqaaqa jiirku sameynayo waxayna toosin doonaan robot -ka si ay awood ugu yeeshaan dhaq -dhaqaaqa xoogaa iska -caabin ah intii suurtogal ah, taasoo u oggolaanaysa jiirka inuu soo jeesto oo uu ku dhaqaaqo garoon caadi ahaan loo isticmaalo tijaabooyinka neerfaha oo leh dhammaan qalabka dareenka lagama maarmaanka ah iyo fiilooyin ka yimid maqaar -galaha ay taageerto robotka.
Qaadashada baahida loo qabo miniaturization waxay u oggolaaneysaa cilmi-baarayaasha inay adeegsadaan wax kasta oo qalab casri ah oo la heli karo, taasoo la micno ah in robot-ka aragti ahaan kor loogu qaadi karo si loo isticmaalo tiknoolojiyadda ugu dambeysay isla marka la soo bandhigo. Si aad u gaarto bartaas, kooxda Dr. Kodandaramaiah waxay mari doonaan dhowr tallaabo - injineernimada qalfoofka; injineernimada masraxa madaxa oo leh dareemayaal loo baahan yahay oo lagu daray koronto-cufnaanta sare iyo kaamirooyinka indho-indheynta dibedda ee indhaha, xarkaha iyo wax ka badan; samaynta tijaabada kursiga hoose; ku -hagaajinta robot -ka wax -soo -saarka jiirku keeni karo; go'aaminta sida loo soo bandhigo baaritaannada; iyo ugu dambayntii duubis toos ah. Iyada oo la adeegsanayo farsamadan hoose, Dr. Kodandaramaiah wuxuu rajaynayaa inuu ka caawiyo cilmi-baarayaashu inay u soo dhawaadaan gobolka halkaas oo ay ka samayn karaan cajalado neerfaha oo ballaadhan oo maskaxda ah oo maaddooyin si xor ah u dhaqma waqtiyada dheer.
Eva Dyer, Ph.D., Kaaliyaha Macalinka, Wallace H. Coulter Qeybta Injineeriyada biomedical, Machadka Teknolojiyadda Georgia & Emory University
"Isbarbar dhigga Xogta Buugag-Weyn ballaaran oo Waqti Dheer, Boos, iyo Dhaqan ”
Awoodda lagu daawanayo iyo u duubto xogta neural-ka ee qeybaha waaweyn ee maskaxda waxay dhalisay tiro aad u badan oo xog ah, taasoo suurtogal ka dhigaysa in la helo qaabab ku jira macluumaadka oo sharxi kara inta neeroroniyaashu ay wada shaqeeyaan si ay u soo gudbiyaan macluumaadka adduunka. Xitaa iyada oo la marayo horumarro cusub oo ah helitaanka qaabab cabbirkoodu hooseeyo oo laga helo xog-uruurinta, wali way adag tahay in la isbarbardhigo duubitaanno ballaaran oo duug ah, ha noqoto in ka badan waqtiyo dheer, ama guud ahaan shaqsiyaad kaladuwan oo xallinaya isla shaqooyin ama howlo la mid ah, ama dhammaan gobollada cudurrada. Khibradda Dr. Dyer iyadoo la adeegsanayo barashada mashiinka (ML) si loo weeciyo howlaha maskaxda ayaa waxay u horseeday xalka cusub si ay u garto astaamaha buugaag badan oo muhiim ah.
Shaqada Dr. Dyer waxay ku lug leedahay abuurista algorithms-ka barashada mashiinka si looga soo saaro macluumaad macno leh xog aruurinta neural, kuwaas oo lagu calaamadeeyay in lagu garto in xayawaanku uu hurdo, soo jeedo, hurdo leeyahay, ama ku lug leeyahay mowduucyo kala duwan ama dhaqano. Xeerarka cusub ee xisaabeed ee loo yaqaan 'cryptography' ayaa dhiirrigeliya algorithms-ka si loo garto qaababka la midka ah ee noocyada xogta gaarka ah, iyagoo si gaar ah u eegaya waxqabadka neural-ka ee laga soo saaray gobollada maskaxda ee kaladuwan oo ah halka laga bilaabayo soo gudbinta xogta isku-habeynta. Iskuxirida waxqabadka neural waxay muujin kartaa sida qaababka neural ay ula xiriiraan dabeecadda iyo xaalada maaddada sidoo kale looga hortago musuqmaasuqa sanqadha, waxayna bixisaa talaabo muhiim ah xagga farsamooyinka falanqaynta awooda badan.
Ujeedada labaad ee Dr. Dyer waxay ka caawin doontaa cilmi baarayaasha inay dib ugu laabtaan neurons-yada keliya si ay u fahmaan sida ay gacan uga geystaan isbeddelada guud ee howlaha neural, iyo in loo adeegsan karo saadaalinnada maskaxda ee gaar ah. Cilmi baaristu waxay sii sahamin doontaa haddii kala duwanaashaha dabeecadaha dib loogu celin karo noocyo gaar ah oo unug ah, iyo sida kala duwanaanshaha lagu arko kaydadka macluumaadka loo istcimaali karo in lagu garto kala duwanaanshaha xayawaan kasta. Awoodda dejinta iyo isbarbardhigayaasha xog aruurinta neural ee weyn waxay cadeyn u tahay cilmi baarista neerfayaasha iyadoo la muujinayo sida cudurka neurodegenerative uu u saameeyo macluumaadka maskaxda.
Rikky Muller, Ph.D., Kaaliyaha Professor of injineerinka Korontada iyo Sayniska Kombiyuutarka, Jaamacadda California - Berkeley
"Qalab Holographic ah oo Xawaare sare leh oo loogu talagalay xakameynta Optogenetic ee kumanaan Neurons ah
Optogenetics - hiddo ahaan wax ka beddelka neerfayaasha si ay u noqdaan kuwo iftiin u leh si ay cilmi-baarayaashu u hawlgalaan ama u aamusiiyaan markay doonaan - ayaa cilmi-baaris ku beddeleen cilmi-nafsi. Waxay kuxiran yihiin mashiinnada iftiinka wareega ee iftiinka u diraa holograam 3D, cilmi-baarayaashu waxay si gaar ah u maamuli karaan neerfayaal badan oo loo qaybiyay dhammaan gobollada saddex-cabbirka maskaxda ah gudaheeda. Laakiin ilaa hada, ma jirin nin holographic projector ah oo xakameyn kara neurons-ka xawaaraha maskaxda laga helo si dabiici ah.
Dr. Muller ayaa nashqadeeya isla markaana dhisaya mashruuc holographic ah si loo xalliyo arrintan Qalabkeeda ayaa ku shuban doona sawirrada iftiinka ee holographic oo leh 10,000 oo xabbadood halkii sekenkiiba (Hz). Qaar badan oo ka mid ah telefishannada hadda jira ayaa dib-u-cusboonaysiiya 60 guntin daqiiqaddiiba, isbarbar dhig, iyo aaladaha ugu dhaqsaha badan ee ganacsi ahaan loo heli karo waxay ka sareeyaan 500 Hz. Heerkan cusbooneysiinta ee sarreeya waa lagama maarmaan in la sameeyo calaamadaha neural-ka ee dabiiciga ah, taas oo ku lug leh waqtiyada ficil ee qiyaastii ah 1 / 1,000th ee sekenkiiba (oo u dhiganta 1,000 Hz marka la tixgelinayo heerarka nasiibka.) Intaa waxaa dheer, Muller wuxuu higsanayaa inuu bartilmaameedsado kumanaan neurons ah oo saxda ah, iyo sida heerarka sare ee TV-yada ay u keenaan sawirro shuruud leh, hologram 10,000 ah ayaa soo bandhigi doonta saami weyn.
Dr. Muller, Injineer koronto oo diiradda saaraya neerfaha, ayaa si joogto ah ula tashanaya dhakhaatiirta neerfaha maadaama ay naqshadeyso, tijaabiso, oo ay dhisto aaladda si loo hubiyo inay u adeegto baahiyahooda. Qalabku wuxuu adeegsan doonaa qalab yar yar oo loo yaqaan 'microromirror', kaas oo sawiri doona qaababka iftiinka 3D ee meelaha khaaska ah iyo qoto dheer iyada oo loo adeegsanayo qalabka korantada muraayadaha yaryar; Kadibna iftiinka waxaa loosoo gudbiyaa dhowr muraayadood oo taxan. Mashruucu wuxuu marka hore qaabeyn doonaa oo dhisi doonaa laba diyaaradood - qaab yar oo loogu talagalay tijaabinta iyo caddeynta fikradda, iyo qaab ballaaran, oo ay la socdaan darawalada laxiriira iyo kontaroolada loo isticmaali doono cabirka iyo habeynta. Ugu dambeyntiina, kooxda Dr. Muller kooxdu waxay soo saari doontaa qalab taban oo iftiin leh oo iftiin leh. Waxaa la rajeynayaa in qalabkani siinayo cilmi-baarayaal awood aan caadi aheyn oo lagu xakameeyo oo lagu tijaabiyo isku xirnaanta neural.
Kai Zinn, Ph.D., Howard iyo Gwen Laurie Smits Professor of Biology, Machadka Teknolojiyadda California
"Barnaqsiga Enzymatic Encymatic Barcoding ”
Tijaabooyin badan oo neerfayaasha ah ayaa ku lug leh falanqaynta antibody iyo receptor ku xiraya sagxadda unugyada. Sidoo kale, fahamka horumarka neural iyo shaqadu waxay u baahan yihiin aqoon ku saabsan gudaheeda is dhexgalka ka dhexeeya borotiinka dusha sare ee unugyada. Tijaabooyin sare oo soo saaraya oo ku lug leh borotiinno badanaa waa waqti qaadasho iyo dhib badan maaddaama borotiin kasta uu leeyahay sifooyin kiimikaad oo kala duwan. Si looga caawiyo furitaanka fursado cusub oo loogu talagalay cilmi-baarista maskaxda, Dr. Zinn iyo kooxdiisu waxay horumarinayaan hab qaab-dhismeed leh “barcode” borotiinno kaladuwan, iyagoo cilmi-baarayaashu siinaya aalad dabacsan.
Baaritaanka qaabkiisa ugu fudud waxaa ka mid ah gelinta astaamaha hidda-socodka unugyada ka dibna raadinta calaamadahaas kadib tijaabada si loo go'aamiyo molecule-yada isku haysta. Waxaa loo isticmaalay aashitada nukliyeerka leh guul weyn. Borotiinku way adag yihiin, hase yeeshee, ma jirin dariiqii lagu xannibi lahaa kumanaanka borotiinno ee danaha cilmi-baarayaasha ah iyada oo aan loo adeegsan isgoysyada kiimikada, taas oo inta badan wax ka beddeleysa shaqada borotiinka. Dr. Zinn wuxuu ka adkaanayaa caqabadaas adeegsiga borotiinno isku-dhafan oo ay ku jiraan modules borotiinno aad u sarreeya oo ku lifaaqan "enzymes" HUH-domain ", kuwaas oo si wada-jir ah iskugu xiri kara is-xakamaynta oligonucleotides. Mowjadaha xiraya waxay u oggolaanayaan barcodeyaasha inay ku xirnaadaan unugyada difaaca jirka, borotiinnada biotinylated, iyo borotiinno leh astaamo isku xirka xirmooyinka. Tani waxay siineysaa marin u helista inta badan borotiinada xiisaha u leh neerfayaasha. Mashruucu wuxuu sidoo kale ku lug leeyahay dhisidda daahfurka nanoparticle-ka oo leh 60 qodob oo isku xirnaan ah oo isku mar ku dhegi kara boodhka iyo borotiyada danaha. Cillad-gacmeedkaani wuxuu sare u qaadayaa u fiirsashada is-dhexgalka - is-dhexgalka daciifka ah ayaa sii xoogaysanaya markii borotiinno badan oo qaab dhismeed ah ay isdhaafsanayaan.
Mashruuca Dr. Zinn wuxuu ku xirnaan doonaa sameynta borotokoollada iyo geedi socodka ku lugta leh qabashada dhowr nooc oo tijaabooyin unugyo sare ah oo unugyo tijaabo ah oo bixin doona macluumaad ku saabsan borotiinka. Kuwaas waxaa ka mid ah tijaabooyin la adeegsanayo unugyada ka hortagga ee loo yaqaan 'barcoded' si loo indho indheeyo muujinta soo-dhoweeyeyaasha dusha sare ee unugyada, loo fiirsado isbeddelada unugyada markii ay soo gaaraan borotiinnada qaarkood, si loo muujiyo tiro aad u badan oo antigens-ka unugyada maskaxda, si loo baaro is-dhexgalka tiro aad u badan oo protein ah, iyo Aqoonsadaan soo-galootiga loogu talagalay borotiinka “agoonta”. Thanks to modularity, fududeynta, iyo awoodda loogu oggolaado borotiinno fara badan inay isla falgalaan hal mar, Dr. Zinn wuxuu rajeynayaa in nidaamkiisa 'barcoding' uu awood u yeelan doono isla markaana dardar geliyo kuwan iyo noocyo kale oo badan oo tijaabooyinka neerfaha ah.
Gilad Evrony, MD, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Xarunta Genetics-ka Genetics iyo Genomics, Depts. ee Caafimaadka Caruurta iyo Neuroscience & Physiology, Caafimaadka New York University Langone Health
"BADBAADADA: Teknolojiyad hal-unug oo noocyo badan leh oo loogu talo galay xallinta qaraarka sare ee Raadinta Maskaxda Aadanaha"
Waa aqoon guud oo ah in bini-aadam kasta uu ku bilowdo hal unug oo leh hal nooc oo ah 'tilmaamo', laakiin faahfaahinta sida hal unug uu u noqon lahaa kumanaan kun - oo ay ku jiraan tobanaan balaayiin unug oo maskaxda ah - ayaan wali si weyn loo aqoon. Daraasaadka Dr. Evrony waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo tikniyoolajiyad la yiraahdo TAPESTRY, oo laga yaabo in uu iftiimiyo howshan iyada oo la dhisayo "geedka qoyska" ee unugyada maskaxda, taas oo muujineysa unugyada progenitor-ka ee keena boqolaalka nooc ee unugyada qaangaarka ee maskaxda aadanaha.
Teknolojiyaddu waxay xallin kartaa qaar ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee wajahaya cilmi-baarayaashu barashada daraasaadka maskaxda aadanaha. Habka ugu muhiimsan ee lagu barto horumarka iyadoo lagu raadinayo xariijin (ayada oo lagu tilmaamo astaamaha unugyada xayawaanka aan qaan gaarin ka dibna barashada sida calaamadahaas loogu gudbiyo abtirsiinyadooda) waa wax aan macquul aheyn aadanaha maxaa yeelay waa ku faafa. Shaqadii hore ee Dr. Evrony oo ay weheliso asxaabta ayaa muujisay in isbedelada si dabiici ah u dhaca loo isticmaali karo raadinta xariiqda maskaxda maskaxda. TAPESTRY ujeedadiisu waa in la hormariyo oo la cabbiro qaabkan iyada oo la xallinayo dhowr xadidan oo qaababka hadda jira. Marka hore, baadi-soocidda ayaa u baahan go'doomin badan oo lagu kalsoonaan karo iyo cod-siinta tirada yar ee DNA ee unugyada hal ah. Marka labaad, fahan faahfaahsan oo ku saabsan horumarinta maskaxda aadanaha waxay u baahan tahay inay noqoto mid ku-kacsan oo wax ku ool ah si loogu oggolaado in kumbuyuutar ama kumanaan kumanaan unugyo shaqsi ah loo adeegsado. Ugu dambeyntiina, waxay u baahan tahay inay sidoo kale qariso astaamaha unugyada - ma ahan oo keliya aragtida sida ay unugyadu isugu dhow yihiin, laakiin sidoo kale noocyada unugyada ay yihiin. TAPESTRY waxay raadineysaa inay xalliso caqabadahaas.
Qaabka Dr. Evrony wuxuu ku habboon yahay dhammaan unugyada aadanaha, laakiin wuxuu dan gaar ah ka leeyahay cilladaha maskaxda. Mar haddii khariidadaha maskaxda ee caafimaad la diyaariyey, waxaa loo isticmaali karaa aasaas ahaan si loo arko sida horumarka maskaxdu ugu kala duwan yahay shaqsiyaadka qaba dhibaatooyin kaladuwan oo laga yaabo inay ka soo baxaan horumarka, sida cudurka ootiisam iyo shisoofrani.
Iaroslav 'Alex' Savtchouk, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Qeybta cilmiga bayoolajiga, Jaamacadda Marquette
"Sawirada Deg degga ah ee Sawirka Maskaxda ee Muuqaalka Mashiinka Mashiinka ee loo yaqaan 'Quadrangular Stereoscopy'
Farsamooyinka sawirka maskaxda ee casriga ah waxay u oggolaadaan daawashada lakabka khafiifka ah ee maskaxda, laakiin sawirada nashaadaad fara badan oo maskaxda ah oo leh 3-cabbir ballaadhan - sida mugga maskaxda - ayaa cadeeyay cabsi. Dr. Savtchouk wuxuu soo saaray qaab u saamaxa cilmi-baarayaasha inay arkaan waxa dhacaya kaliya maahan dusha sare ee maskaxda, laakiin waxay ku dhexjiraan gudaha iyo xallinta khilaafaadka kumeelgaarka ah ee ka sarreeya sidii hore.
Habka udub-dhexaadka - labo-photon microscopy - wuxuu soo qaadaa waxqabadka maskaxda isagoo raadinaya fluorescence unugyada maskaxda hidde ahaan lagu beddelay xayawaannada sheybaarka. Hal laser ah, macluumaad qoto dheer ayaa loo duubay si tartiib ah. Iyada oo leh laba laambarka leysarka, cilmi baarayaashu waxay aasaasi u yihiin aragga maskaxda - waxay arki karaan waxa u dhow iyo ka fog, laakiin weli waxaa jira “muuqaallo” muuqaal ah oo aan wax laga arki karin (tusaale ahaan, marka qofku eego gees qolka jiiska, qaybo gogo ' waxaa suuragal ah in lagu xannibo qaybo dhow.) Dr. Savtchouk wuxuu xallinayaa arrintan iyada oo lagu darayo laba guluubyo laser oo dheeri ah, kaas oo bixiya aragtida afar geesoodka ah isla markaana aad u yaraynaysa dhibco indha la'aantu. Waxa kale oo uu dersaaya waqtiga loo yaqaan 'lesers' - kaas oo si dhakhso leh u garaaca - sidaa darteed cilmi baadhayaashu way ogyihiin nooca leysarka ku arkay waxqabadka, muhiim u ah dhisidda moodal seddex-cabbir oo sax ah oo waqti-sax ah leh.
Mashruuca Dr. Savtchouk wuxuu marka hore ku lug leeyahay qaabeynta nidaamka kumbuyuutarrada kombiyuutarka, ka dib marka lagu soo bandhigo codsigiisa moodellada mobiladaha. Hadafkiisu waa in la horumariyo habab lagu cusboonaysiin karo labo-photon microscopes labadaba iyada oo lagu sii kordhinayo alwaaxyada leysarka iyo kor u qaadista qalabka iyo softiweerka, u oggolaanaya shaybaarka in ay ka faa'iideystaan teknolojiyada iyada oo aan la bixinayn nidaam cusub oo dhan.
Nanthia Suthana, Ph.D., Kuxirfadle jaamacadeed, Qeybta cilmu-nafsiga iyo cilmiga biobehavioral, Jaamacadda California Los Angeles
Rikoodh Wireless iyo Programmable iyo Kicinta Firfircoonida Maskaxda ee Feejignaanta Maskaxda ee Aadamiga u Dhaqdhaqaaqa Aadanaha Ayaa Lagu Dhex Galiyaa Astaamo (Ama Xarago Leh)
Daraasadda dhacdooyinka neerfayaasha maskaxda ee bini'aadamka waxay soo bandhigayaan caqabado badan - maskaxda aadanaha si toos ah looma baran karo sida maskaxda, waana adag tahay in dib loo muujiyo (oo la diiwaan galiyo natiijooyinka) ifafaale ee sheybaar. Dr. Suthana waxay soo jeedinaysaa inay soo saarto nidaam adeegsanaya xaqiiqooyin casriyeysan iyo mid la taaban karo si loogu abuuro xaalado tijaabo ah oo macquul ah maadooyinkeeda. Waxay isticmaashaa xog ay duubtay aaladaha maskaxda ee lagu shaqeyn karo ee loo isticmaalo daaweynta suuxdin.
Boqolaal kun oo dad ah ayaa qalabkan la dhajiyay, iyo inbadan oo ka mid ah aaladaha la galiyay waxay oggol yihiin barnaamijyada bilaa wireless iyo soo kabashada xogta. Habka Dr. Suthana wuxuu ka faa'ideysanayaa kan dambe - aaladahaani waxay duubtaan dhammaan noocyada firfircoonida maskaxda, waxayna kuxiran kartaa xogta la duubay iyadoo maaddooyinka ay dhexgalayaan VR ama tijaabooyinka ku saleysan AR-da. Muhiimad ahaan, maaddooyinka waxay u dhaqaaqi karaan si xor ah maadaama ay wataan kormeerka dhaqdhaqaaqa maskaxda ayna ku hayaan qalabka. Qabsashada dhaqdhaqaaqa iyo cabbiraadda biometric isku mar ayaa la samayn karaa, isku uruurinta sawir dhammaystiran oo jawaabaha ah.
Dr. Suthana wuxuu lashaqeynayaa koox isku dhafan si ay nidaamka u shaqeeyaan; kooxdan waxaa ku jira injineerada korantada, jimicsiga, iyo saynisyahano kombuyuutareed. Xaqiiqooyinka aasaasiga ah sida latency signalka waxay u baahan yihiin in la dejiyo si xogta loo wada shaqeyn karo loona cabiro si sax ah. Ugu dambeyntiina, waxay rumeysan tahay in bini-aadamka u dhaqma si madax-bannaan ula falgalaan jilitaanka ugu macquulsan ee suuragalka ah ay u oggolaan doonaan cilmi-baarayaashu inay si aad ah u fahmaan sida maskaxdu u shaqeyso. Marka lagu daro su'aalaha aasaasiga ah ee dareemayaasha - sida waxa dhaqdhaqaaqa maskaxda iyo jawaabaha jirka ay la socdaan ficillo gaar ah ama ficilcelinta kicinta - nidaamku wuxuu muujinayaa ballanqaad cilmi-baaris oo ku saabsan jahwareerka walbahaarka iyo xaalado kale oo ah waxyaabaha kicinta bey'adda loogu sawirayo jawi dalxiis oo la xakameynayo.
Michale S. Fee, Ph.D., Glen V. iyo Phyllis F. Dorflinger Professor of Computational and Systems Neuroscience, Waaxda Maskaxda iyo Cognitive Sciences, Machadka Farsamada ee Massachusetts; iyo Baaraha, Machadka McGovern ee Cilmi-baarista Maskaxda
"Tiknoolajiyada cusub ee sawirista iyo falanqaynta xayawaanka gobolka ee xayawaanka dhulalka xayawaanka oo si xor ah u dhaqma"
Barashada waxqabadka neural ee maskaxda xayawaanku waa caqabad dheer oo cilmi-baarayaasha ah. Xeeladaha hadda jira waa kuwo aan dhammaystirnayn: tirada xaddiga xajmiga ee loo yaqaan 'microscopes' waxay u baahan tahay xayawaanka in ay xaddidaan hawshooda, iyo microscopeskani waxay bixiyaan aragti xaddidan ee aragtida qanjirada. Iyagoo samaynaya tallaabooyin yar yar ee mitir-dhimista mitir-maskaxeed, Dr. Fee iyo shaybaarkiisa ayaa horumarinaya qalabka loo baahan yahay si loo arko waxa ku socda maskaxda xayawaanka halka xayawaanku uu xor u yahay inuu sameeyo dabeecadaha dabiiciga ah.
Qalabka microscope ayaa u oggolaanaya Dr. Fee in uu fiiriyo isbeddelka ku dhaca maskaxda ee shimbiraha dhalinyarada ah marka ay bartaan inay heesaan heesahooda. Marka ay dhagaystaan, ku celiyaan, oo bartaan, Dr. Fee dukumiintiyada wareegyada neuraliska ee horumarinaya qayb ka mid ah geedi socodka barashada adag. Xawaaladahaani waxay la xiriiraan wareegyada bini'aadamka kuwaas oo sameeya inta lagu jiro barashada adag ee wadooyinka, sida barashada baaskiilada, iyo khalkhalka xaaladaha qaarkood oo ay ka mid yihiin cudurka Parkinson. Iyadoo loo eegayo ujeedadiisa ay tahay in la diiwaangeliyo habka waxbarasho ee dabiiciga ah, waa muhiimada muhiimka ah si loo xajiyo dhaqdhaqaaqa neefsiga inta lagu jiro dabeecadaha dabiiciga ah.
Marka laga soo tago yareeynta, mikroscope cusub wuxuu awood u leeyahay inuu diiwaan geliyo amarro badan oo qanjidho ka badan farsamooyinka kale ee loo isticmaalo xayawaanka si xor ah u dhaqdhaqaaqa, waxaana la isku dari doonaa falanqaynta xogta cusub ee u saamaxaysa in cilmi-baadhayaashu ay sameeyaan kormeerka waqtiga dhabta ah iyo tijaabooyinka, xawaaraha socodka cilmi-baarista. Waxay yeelan doontaa codsiyo degdeg ah oo ballaadhan oo loogu talagalay cilmi-baarayaasha ku baaraya noocyada kala duwan ee dabeecadaha maskaxda ee xayawaanka yaryar.
Marco Gallio, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Waaxda Neurobiology, Jaamacadda Northwestern
"Xiriirinta dib-u-xiridda ee maskaxda nool"
Daraasaddaani waxay ujeedadeedu tahay in ay kordhiso fahamkayaga sida maskaxdu u shaqayso iyadoo u oggolaanaysa saynisyahannadu inay xaddidaan isku xirka synaptic iyo inay ku dhiirigeliyaan isku xirnaanta cusub ee dhexdhexaadinta. Dib-u-kicinta maskaxdu waxay u oggolaanaysaa cilmi-baadhayaasha in ay si fiican u fahmaan xiriirka ka dhexeeya xidhiidhada qaybaha gaarka ah ee saameynta neerfaha.
Mid kasta oo neuron ee ku jira wareegga maskaxda ayaa isku xirta bartilmaameedyo kala duwan. Bartilmaameed kastaa wuxuu yeelan karaa shaqeyn gaar ah, sidaa darteedna wuxuu ka shaqeeyaa isla macluumaadkii soo-galootiga ahaa si ka duwan si ka duwan. Tusaale ahaan, qanjirro gaar ah oo maskaxda gaaban oo maskaxda gashan ayaa qaadaya macluumaadka ku saabsan bii'ada dibedda ee loo isticmaalo si dhakhso ah looga baxsado hanjabaadaha dhow (dabeecad dhalanteed), laakiin sidoo kale inay soo saaraan jaaliyado muddo dheer soconaya iyagoo baranaya.
Tiknoolajiyada la soo jeediyey waxay u oggolaanaysaa cilmi-baarayaasha in ay qeexaan xiriiriyeyaasha muhiim u ah geeddi-socodka iyada oo si xushmad leh looga saarayo qalabyada xarumaha waxbarashada inta ay ka tagayaan dhammaan xiriiriyeyaasha kale. Mashruucu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu isticmaalo injineernimada hidaha si uu u soo saaro borotiinka farsamaysan oo dhexdhexaadin kara midabtakoor ama jilitaan / dabacsanaan u dhaxeeya lamaanayaasha hidetada ah ee lagu garan karo maskaxda xayawaanka noolaha nool. Marka lagu daro caddaynta noocaas ah in la garto maskaxda, suurtagalinta cilmi-baarista waxay dhalin doontaa noocyo miro cusub oo miro ah oo leh genetics gaar ah oo isla markiiba lala wadaagi karo cilmi-baarayaasha kale. Naqshadeynta, qalabkaan si sahlan ayaa wax looga bedeli karaa isticmaalka nooc kasta oo xayawaan ah ama lagu dabaqo qaybo kala duwan oo maskaxda ah, taas oo u suurtogelisa fasal cusub oo ah daraasado cilmi-nafsi ah oo leh saameyn qoto-dheer oo loogu talagalay fahamkeenna sida habka maskaxda bani-aadmigu u shaqeeyo.
Sam Sober, Ph.D. , Associate Professor, Department of Biology, Jaamacadda Emory
Muhannad Bakir, Ph.D., Professor, Iskuulada Qalabka Korontada iyo Kombuyuutarada iyo Agaasime Ku-xigeenka, Xarunta Isku-xidhka iyo Xarunta, Machadka Tiknoolajiga Georgia
"Ereyga elektarooniga ah ee loo yaqaan" electrode flexible "ayaa loogu talagalay rikoodh ballaadhan oo ka yimaada dhuunta muruqyada oo si xor ah u dhaqma jiirarka iyo jilbaha"
Fahamkayaga sida maskaxdu isku xiriiriso dhaqdhaqaaqa muruqyada inta lagu jiro dhaqanka xirfadlaha ah ayaa xaddiday tiknoolajiyada loo isticmaalo in lagu qoro waxqabadka - sida caadiga ah, fiilooyinka loo geliyo muruqyada oo kaliya waxay ogaan karaan waxqabadyada soo koobay ee calaamado shaqsiyadeed oo badan oo ah habdhiska dareenka loo isticmaalo si loo xakameeyo murqaha. Drs. Sober iyo Bakir waxay horumarinayaan waxa aasaaska u ah "qeexitaan heer sare ah" oo dareere ah (ururinta dareemayaal badan oo yaryar) kuwaas oo xaliya waxyaabo badan oo ka mid ah arrimahan iyaga oo u oggolaanaya cilmi-baarayaasha in ay ogaadaan oo ay qoraan calaamado koronto oo cad oo ka yimaada jilibyada muruqa shakhsi ahaaneed.
Dareemaha la soo jeediyey wuxuu leeyahay wax badan oo ka mid ah qalabka wax lagu qoro oo ka diiwaangashan murqo isagoo aan waxyeello u geysan. (Noocyada hore waxay ku tiirsan yihiin fiilooyinka dhaawici kara muruqyada marka la geliyo, gaar ahaan muruqyada yaryar ee loo isticmaalo xirfad-gacmeedyada wanaagsan.) Daaqadaha waxaa laga soo saaraa alaab jajaban oo ku habboon qaabka muruqa oo qaabka bedelaya sida xayawaanka dhaqaaqa. Intaa waxaa dheer, sababtoo ah arraysyadu waxay ururinayaan macluumaad badan oo ka badan aaladaha hore, waxay leeyihiin goobo la dhiso si ay u ururiyaan una xiraan xogta ka hor inta ay farriimaha u gudbinayaan kombiyuutarrada cilmibaadhista.
Nooca sheybaarka ah ee arrintan ayaa hore u muujiyay aragtiyo cusub: hore ayaa loo aamminsan yahay in nidaamka dareemayaasha ahi uu xakameynayo dhaqdhaqaaqa muruqa iyada oo la maaraynayo tirada guud ee korantada korantada loo diro muruq. Hase yeeshee, helitaanka saxda ah ayaa shaaca ka qaaday in kala duwanaanta heerarka millisecond ee qaababka jadwalka wakhtiyada badan ee isbeddelaya sida murqaha u maamula dhaqanka. Qaybaha cusub waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo jiirarka iyo heesaha gabayada waxayna naga caawin doonaan in aan fahanno xakamaynta neerfaha ee dabeecado badan oo kala duwan oo laga yaabo inay keenaan fikrado cusub oo ku saabsan xanuunka neerfaha ee saameeya xakamaynta motoorka.
Jose M. Carmena, Ph.D., Professor, Waaxda Teknoolajiyadda iyo sayniska Computer, iyo Machadka Helen Wills Neuroscience, University of California Berkeley
Michel M. Maharbiz, Ph.D., Professor, Waaxda qalabka korontada iyo sayniska Computer, Jaamacadda California ee Berkeley
Neural Dust: ultrasonic, awood hooseeya, tiknoolajiyada sarraysa oo aad u sareeya oo loogu talagalay rikoodhada gebi ahaan siman iyo kuwa aan dhammeystirnayn ee maskaxda
Drs. Carmena iyo Maharbiz ayaa iska kaashanaya sidii loo abuuri lahaa jiilka xiga ee maskaxda-mashiinka maskaxda (BMI) iyadoo loo adeegsanayo "loo yaqaano" neefsiga "-hawrka, qiyaasta, ultrasonic dareemayaasha oo laga yaabo inay baabi'iyaan baahida loo qabo fiilooyinka ka soo baxa dhakada, ee loogu talagalay duubista dhabta ah ee dhabta ah, dhabta ah ee la duubo. Inkastoo cilmi-baarayaasha ku jira shaybaaradooda iyo asxaabtooda kale ee Jaamacada California ee Berkeley Department of Electrical Engineering iyo Computer Computer iyo Machadka Helen Wills Neuroscience ayaa waxa ay baranayaan suurtagalnimada tiknooloojiyada boodhka neerfaha ee loo isticmaalo murqaha iyo nidaamka dareenka maskaxda, maalgelinta McKnight waxay u oggolaanayaan inay cilmi-baadhayaashu u adeegsadaan fikradda habka dhexe ee dareenka, habka ay rumaysan yihiin in ay u beddeli karaan neerfaha si isku mid ah qalabka wadnaha pacemaker-ka oo kicin kara wadnaha. Iyada oo loo marayo hawlgallada xiran ee bacriminta neuralada, Carmena iyo Maharbiz waxay u arkaan mustaqbal kaas oo maskaxda loo tababbarayo ama lagu daweynayo si ay u soo celiso shaqooyinka caadiga ah ka dib dhaawaca ama bilawga cudurka neuropsychological.
Ali Gholipour, Ph.D., Kaaliyaha Professor ee Radiology, Dugsiga Caafimaadka Harvard; Agaasimaha Radiology ee Cilmi-baarista Faahfaahinta, iyo cilmi-baare ka shaqeeya Shaybaadhka Radiology ee Xisaabinta ee Isbitaalka Carruurta Boston
Teknoolajiyadda sawir-qaadista oo xooggan oo loogu talagalay falanqaynta mantagelinta horumarka hore ee maskaxda
Dhaqdhaqaaqa uurjiifka, dhalaanka, iyo socod-nololeedyada ayaa keena caqabad gaar ah oo loogu talagalay cilmi-baarayaasha oo diiradda saaraya sawirada sare si ay u falanqeeyaan horumarka hore ee maskaxda iyo cadeeyna khasaarihii suurtogalka ahaa. Kooxda cilmi baarista Dr. Gholipour ee Shaybaadhka Radiology ee Heshiiska Radiology ee Isbitaalka Boston Children's Hospital ayaa ka shaqeynaya sidii loo horumarin lahaa, loo qiimeyn lahaa, loona faafin lahaa tiknoolajiyada sawir-maskaxeed (MRI) ee loo yaqaan 'MRI' iyo software kaas oo u oggolaan doona in cilmi-baadhayaashu ay bartaan oo ku gartaan in-utero, perinatal , iyo hawlaha maskaxda iyo habdhaqanka maskaxda ilmanimada hore. Qalabeynta sawirada cusub iyo muuqaalka sawiradu waxay u horseedi karaan horumarin muuqda oo ku yimaada awoodda bulshada ee neurosigga ah ee ururinta iyo falanqaynta xogta ballaaran si loo wanaajiyo fahamka horukaca maskaxda iyo in la dhiso xiriir si toos ah u ah xanuunada laga yaabo inay ka soo baxaan marxaladaha ugu horreeya ee nolosha.
Alexander Schier, Ph.D., Leo Erikson Cilmi farsamoyaqaannada sayniska ee maadada Molecular iyo Cellular, Waaxda Biyoolojiinka iyo Cudurrada, Xarunta Sayniska Maskaxda, Jaamacadda Harvard
Diiwaangelinta taariikhda hawlaha neuronal iyada oo loo marayo edeb-sameynta
Deeqda Dr. Schier ayaa raadinaysa tiknoolajiyad cusub si loo tijaabiyo in farsamooyinka casriyeynta casriga ah ay qori karaan taariikhda hawlaha neurooniga. Habka la soo jeediyay, oo loo yaqaano GESTARNA (loogu talagalay qaabaynta hiddo-dheelitireed ee astaaminta bartilmaameedka loogu talagalay diiwaan gelinta neuronal-ka), ayaa leh suuragal ah in la diiwaangeliyo dhaqdhaqaaqa neuronal ee malaayiin nayroon muddo dheer. Isticmaalka Zebrafish oo ah nidaamka tusaalaha, qalabyada iyo fikradaha ay soo saareen Dr. Schier iyo kooxdiisa ayaa ugu dambayntii lagu dabaqi karaa nidaamyada kale ee neuronal ah kaas oo genome-edeynta iyo jiilka xiga ee suurtogalka ah ay suurtagal tahay. Taageeradii hore ee taakulaynta McKnight Foundation, Schier waxa ay heshay aqoonsi hore oo xirfad ahaan ah McKnight Scholar (1999-2002), waxana uu helay abaalmarinta abaalmarinta Pain Disorder (2006-2008).
Kwanghun Chung, Ph.D., Machadka Farsamada ee Massachusetts
Dib-u-dhiska proteomic-ka ee badanaa iyo isku xirnaanta maskaxda
Dr. Chung iyo shaybaarkiisa ayaa horumarinaya tiknoolajiyad cusub si loo abuuro khariidad maskaxeed oo dhammeystiran oo khariidad maskaxda ah. Waxa uu isku darsami doonaa teknoolojiyada wax soo saarka unugyada cusub farsamooyinka calaamadaynta hidaha. Khariidadda maskaxeed ee hadda maskaxda ku jirta waa mid hooseeya oo aan dhamaystirnayn; Cilmi-baarista Chung ayaa u oggolaan doonta dareemayaasha cilmi-baarista inay su'aalo weydiiyaan tiro badan oo ka mid ah unugyada, noocyada unugyada, iyo wareegyada unugyada hal mar. Dr Chung ayaa rajeynaya in qaddarkan xallinta sare, mashiinka maskaxda ee dhamaystiran uu xawaareyn doono xajinta helitaanka codsiyada ballaaran ee qalabka neerfaha, wuxuuna u suurtogelinayaa aqoonyahanada inay ku muujiyaan qaababka xayawaanka xoolaha si dhakhso ah oo aan si daacad ah lahayn.
Narayanan (Bobby) Kasthuri, Ph.D., MD, Jaamacada Chicago iyo Argonne National Labs
Maskaxda-X: Khariidadaha Nanoscale ee maskaxda oo dhan iyadoo la adeegsanayo raajo-dheere sare-dheere ah
Shaybaadhka Dr. Kasthuri ayaa isticmaalaya raajo tamar sare leh si loo abuuro khariidado dhamaystiran oo dhamaystiran oo maskaxda ah. Noocyada sawiradu waxay dhalinayaan cadad xad dhaaf ah oo xog ah oo loo kala qaybin karo si loo ogaado meesha uu ku yaal dhammaan neuronka, xididdada dhiigga, iyo qaybta maskaxda. Iyadoo dhalinaysa khariidado jiirka caafimaadka qaba iyo maskaxda bini-aadamka, saynisyahannadu waxay barbar dhigi karaan shaybaarada cudurada wadnaha si ay si fiican u fahmaan farqiga u dhaxeeya maskaxda iyo maskaxda dabiiciga ah ee maskaxda jirran ee ay saameeyeen cudurka autism, sonkorowga iyo istaroogga, cudurada kale.
Stephen Miller, Ph.D., Jaamacadda Massachusetts Medical School
Ka gudubka caqabadaha sawirka maskaxda
Sawirka maskaxdu waa ay adagtahay, maxaa yeelay tijaabooyin badan oo unugyada ah oo aan awoodin inay ka gudbaan barxadda dhiigga-maskaxda (BBB). Dr. Miller iyo shaybaarkiisa ayaa helay habab lagu hagaajinayo sawirada maskaxda ee maskaxda ku jirta iyadoo la xiirayo sifooyinka bioluminescent ee dabka. Kooxda Miller waxay wax ka beddeleen substrate dabka dabiiciga ah si loo kordhiyo awoodda ay u leeyihiin helitaanka maskaxda xayawaanka nool. Nuurka maskaxda waxaa loo isticmaali karaa in lagu ogaado muujinta hiddaha, firfircoonaanta enzyming, kormeerida cudurada, ama qiyaasidda waxtarka daawooyinka cusub.
Long Cai, Ph.D., Machadka Kaliyah ee California
Dib u habeynta aasaaska molecular ee aqoonsiga unugyada ee maskaxda adoo raacaya FISH
Shaybaarka Shar ayaa sameeyay habka sawir-qaadidda oo xooggan oo ku salaysan "hal-abuurka muraayadda tamar-dillaac ah", ama smFISH, taas oo suurtogal u ah in la eego macluumaadka hidda-socodka (sida RNA) gudaha unugyada. Waxa uu hadda raadinayaa inuu habeeyo habkan si uu si toos ah u muujiyo tibaaxda hindhisada ee maskaxda ee xalinta isku midka ah iyadoo la adeegsanayo FISH (SEQFISH) oo xigta.
Cynthia Chestek, Ph.D., Jaamacadda Michigan
Cufan sare 90μmjilicsanaa qaylo dhaadheer ah si loo diiwaan geliyo neuron kasta ee lakabka 5
Shaybaarta Chestek waxay kobcinaysaa habka lagu diiwaan geliyo loona arko muuqaal caafimaad oo isku xiran, oo dhexdhexaad ah, neuroon firfircoon waqtigii loogu talagalay cufnaanta ka weyn tan ka hor. Iyadoo la adeegsanayo habka yar-yar ee fareemka naqshadeenta ah, waxay qorsheyneysaa inay diiwaangeliso maskaxda maskaxda dufanka ka soo jeeda qadiyado kala duwan ka dibna markaa maskaxda loo rogo si ay u aragto wareegga oo dhan. Hadafku waa in la gaaro arrin 64-kan oo lagu daaweyn karo cufnaanta sare iyadoo la isticmaalayo qalab dhexdhexaadiyaha neurosiyaanka ah.
Spencer Smith, Ph.D., Jaamacadda North Carolina ee Chapel Hill
Sawir-qaadashada sawir-baadhista badan ee maskaxda badan
Unugyada kali ah waxay si wadajir ah u dhaqmaan siyaabo kala duwan si ay u yeeshaan fikrado iyo dabeecado. Imtixaanka Multiphoton, oo xallin kara dareemayaasha shakhsiyaadka ah ee millimitir ka fog, waxay u muuqdaan inay bixiyaan hab cusub oo lagu baran karo habkan. Baaritaanka hore ee cilmi-baarista hore ee laba-foormarro ah, Shaybaarka Spencer wuxuu raadinayaa inuu dhiso nidaam aragti qurux badan si loo helo 1 milyan oo nuuroon ah inta uu xajisto awoodda uu u leeyahay in uu kormeero shakhsi ahaan.
Juan Carlos Izpisua Belmonte, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Kala soocida, sifeynta iyo isbedelka hiddaha ee khadadka unugyada germ ee caadiga ah ee hoosta ku jira xaalad cusub
Rugta Izpisua Belmonte waxay u shaqeyneysaa inay gaabiso waqtiga loo baahan yahay si loo horumariyo noocyada xayawaanka xoolaha aan-bini-aadanka-gaar ahaan, miyir-doorsaan. Belmonte waxay samaysay istaraatijiyad lagu fududeynayo jiilka moodooyinka sheyga transgenic iyadoo la adeegsanayo unugyada jeermiska (PGCs). Cilmi-baaristu waxay u suura-galinaysaa in ay bixiso khayraadka unlimited unugyada si ay u bartaan horumarinta unugyada jeermisyada ee hormoonada ee saxan iyo, oo ay weheliso qalab wax ka beddelidda genome, habka ayaa gacan ka geysan kara abuurida noocyada xoolaha ah ee cudurrada aadanaha.
Mitropobes Silicon si loo ilaaliyo socodka maskaxda maskaxda
Mashiinka Masmanidis wuxuu kobciyaa aaladaha salicon-ku salaysan ee micromachined, ama mishiinnada 'microprobes', kaas oo si ballaaran loo heli karo wax soo saarka ballaaran wuxuuna ku duubi karaa qanjirro badan oo hal mar ah xalka qiyaasta millisecond. Microprobes waxay awood u siinaysaa Masmanidis inay barato sida unugyada maskaxda badani u dhexgalaan inta lagu jiro dhaqanka iyo barashada. Intaa waxaa dheer, shaybaarkiisa ayaa farsamooyinka cirib-tirka ah u noqon doona si sax ah loogu calaamadiyo goobaha duubista, hagaajinta saxsanaanta maaraynta dhaqdhaqaaqa maskaxda.
Kate O'Connor-Giles, Ph.D., Jaamacadda Wisconsin, Madison
Qalabka CRISPR / Cas9 oo loogu talagalay falanqaynta wareega wareegga wareegga
O'Connor-Giles wuxuu doonayaa in uu horumariyo qalabka isdhexgalka si uu u aqoonsado isla markaana u helo xakameynta hiddo-wadaha ee neuronal. Qalabkani wuxuu bixin doonaa ilo muhiim ah oo loogu talagalay tabarucidda farsamooyinka xubnaha taranka ee loo yaqaan 'neuronal identity' iyo 'neuronal subtypes' dabeecadda. Shaybaarka O'Connor-Giles wuxuu adeegsan doonaa tiknoolojiyada isku midka ah si uu u fahmo sida xuubka nuuroonku wada jir u yahay inta lagu jiro horumarka. Shaqadu waxay ku saleysneysaa guushii ugu dambaysay ee la qabsashada sheybaarka ee CRISPR / Cas9 genome injineerka ee miro-khudradda.
Thomas R. Clandinin, Ph.D.Jaamacadda Stanford
Nidaam hidda ah oo loogu talagalay mashiinnada shabakadaha neurooniga ee lagu qeexay qalabka korontada
Cilmi-baarista ugu badan ee wareegga maskaxdu waxay diiradda saareysaa imtixaannada kiimikada, kuwaas oo si sahlan loo baran karo marka loo eego qalabka korontada. Laakiin sawirka aan dhameystirneyn ee kabitaanka maskaxdu wuxuu joojiyaa dadaalka lagu fahmo isbedelka waxqabadka maskaxda. Clandin wuxuu soo jeedinayaa inuu hormariyo habka guud ee loo yaqaan "genetic method" si loo ogaado nooca nuuroonku ku xiran yahay koronto ahaan dadka kale. Dhamaadka muddada labada sano ah ee deeq-lacageedka, wuxuu rajeynayaa inuu qabto qalab shaqeynaya qalabka dareenka miraha iyo sidoo kale baadhitaan ku saabsan xiriiro koronto oo gaar ah ee maskaxda duulaya, iyo qalab isku mid ah oo diyaar u ah baaritaanka jiirka.
Matthew J. Kennedy, Ph.D., iyo Chandra L. Tucker, Ph.D., Jaamacadda Colorado - Denver
Qalab fudud oo lagu maareynayo qalabka iyo wareegyada
Optogeneticsis beer cusub oo cusub oo ku lug leh xakameynta jilidda neuronal leh iftiinka. Kennedy iyo Tucker waxay rajeynayaan in ay ballaadhiyaan goobta qalabka cusub ee injineernimada kuwaas oo u oggolaan doona isticmaalayaasha inay isticmaalaan iftiin si ay u xakameyaan geeddi-socodka hoose laga bilaabo dabka neuronal, oo diirada saaraya muujinta molecules muhiim u ah abuuritaanka synapse, tirtirida iyo baaxadda. Waxay sidoo kale qorsheynayaan inay sameeyaan qalab u oggolaanaya dadka isticmaala inay xakameeyaan dariiqooyinka astaaminta asaasiga ah ee mas'uulka ka ah barashada iyo xusuusta maskaxda.
Zachary A. Knight, Ph.D., Jaamacadda California - San Francisco
Isku xirka neuromodulation leh ribosomes engineered
Maskaxda naasaha waxa ku jira boqolaal nooc oo unugyada unugyada unugyada ah, mid kasta oo leh qaabab kala duwan oo muujinaya hidda-gunta. Shaybaarka Knight wuxuu dhisayaa qalab loogu talagalay maareynta munaasadaha maadada 'biodochemical' ee maskaxda maskaxda iyadoo loo marayo kala duwanaanshaha unugyada kala duwan ee unugyada. Waxa uu hormarin doonaa hababka loogu talagalay qabashada RNA oo gacan ka geysan karta in la go'aamiyo aqoonsiga unugyada molecular ee unugyada hoose. Qalabkani wuxuu u ogolaanayaa neuroshoistayaasha inay aqoonsadaan qanjirrada gaarka ah ee la beddelo inta lagu jiro isbedelka dabeecadda, physiology ama cudur. Unugyada la aqoonsan yahay ayaa markaa loo isticmaali karaa hiddo ahaan si ay u fahmaan shaqadooda.
Don B. Arnold, Ph.D., Associate Professor of Biology Molecular & Computational Biology, Jaamacada Southern California
Caabuqyada Dabaysha - Qalabka Lacagta tooska ah ee Qanjidhada Dheecaanka ah
Qanjirrada waxaa si joogto ah loo sameeyaa oo maskaxda ku burburiyaa. Dr. Arnold wuxuu ka shaqeynayaa qalabka si loogu sahlo saynisyahannada in ay wax ka qabtaan geeddi-socodka nabarrada borotiinka ee cilmi-baarista noolaha. Qalabkani, oo loo yaqaana sidii wax looga qaban lahaa, wuxuu dhexdhexaadin karaa isbedelka degdegga ah, waxtarka leh iyo kala-duwanaanta borotiinka. Baadhitaan ayaa laga yaabaa inay hoos u dhacdo si ay u tijaabiso shaqadooda unugyada caadiga ah ama ay baaraan saamaynta halista ah ee borotiinka ah ee noolaha-oo ku jira cudurka neurodegenerative, tusaale ahaan. Waqtigan xaadirka ah, saynisyahannadu waxay kaliya u keeni karaan abortanku si aan toos ahayn, iyada oo la tirtiro hindhiga, ama RNA, oo qaylo dhaantada. Ka foojignaantu waxay keenaysaa hoos u dhigida tooska ah ee borotiinka bartilmaameedka, sidaas darteedna si dhakhso ah u shaqeeya. Waxay sidoo kale bartilmaameedsan karaan borotiinka gaar ahaan is-waafajinta ama kuwa leh isbeddelka dambe ee isbeddelka. Dr. Arnold wuxuu tijaabin doonaa isticmaalka xakamaynta isdhexgalka iyada oo la maareynayo macdanta borotiinka ee postsynaptic si ay u barato shaqeynta sinaptic, homeostasis iyo baqshiinka gudaha maskaxda. Cilmi-baaristan, haddii ay ku guulaysato, waxay yeelan kartaa codsi ballaadhan oo ku saabsan sayniska bayoolajiga.
James Eberwine, Ph.D., Professor Pharmacology, iyo Ivan J. Dmochowski, Associate Professor of Chemistry, Jaamacadda Pennsylvania
TIVA-tag wuxuu u suurtageliyaa Genomics Nidaamyada Qalabka Jilicsan
Inkastoo ay suurtogal u tahay dhowr sano in ay barato hiddaha hidaha ee unugyada shaybaarada shakhsiyaadka, horumarka joogtada ah ee neurobiology waxay u baahan tahay awood u lahaanshaha baaritaanka farsamooyinka hiddaha iyo nidaamka heerarka nidaamka, unugyada caanaha ama noolaha nool. Drs. Eberwine iyo Dmochowski waxay ka shaqeynayaan habka looga takhaluso unugyada noolaha iyada oo loo marayo qaab ay horay u yeesheen, oo la yiraahdo TIVA-tag (oo loogu talagalay falanqaynta "transcript in In Vivo"). Inta lagu jiro xilliga deeqda, waxay qorsheynayaan in ay habeeyaan kiimiko ee xeryaha TIVA-tag si ay u soo ururiyaan RNA unugyada iyaga oo leh qaas u gaar ah, waxtarka iyo waxyeellada unugyada ka yar intii hore ee suurtagalka ah. Dhammaadka muddada deeq-bixinta waxay doonayaan in ay soo dhistaan habka TIVA-tag ee habka loo yaqaan "genomics".
Doris Tsao, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Biology, Machadka Teknoolajiyadda California, iyo William J. Tyler, Ph.D., Kaaliyaha Professor ee Machadka Cilmi-baarista Virginia Tech Carilion, Iskuulka Machadyada Biomedical iyo Sayniska
Isbedelka Farsamaynta ee Xadida Maskaxda Intabadan ee Isticmaalida Ultrasound
Neuroscience waxaa ka maqan qalab loogu talagalay in aan loo baahnayn dhiirrigelin gaar ah oo 3D ah meel kasta oo maskaxda ka mid ah. Shaqada hore ee Dr. Tyler ayaa muujisay in neuromodulation-ga ultrasonic aan si toos ah u kicin karin neur-maanka maskaxda nool. Tallaabada xigta waa in lagu gartaa sida ultrasoundku u saameeyo masiibo aadanaha, maskaxda, oo maskaxdu ay ka weyn tahay oo ka sii adag tahay tan maskaxda. Cilmi-baadhayaashu waxay qorsheynayaan in ay fiiriyaan jawaabaha neuronal, socodka dhiigga ee maskaxda, iyo dabeecadda xayawaanka inta lagu guda jiro xeeladeynta neuromodixinta ultrasonic. Ugu dambeyn, Drs. Tsao iyo Tyler waxay bartilmaameedsanayaan habka loo isticmaalo ultrasound si loo kiciyo meelaha gaarka ah ee maskaxda dadka, kaas oo bixin doona qalab cusub oo lagu fahmo xeeladaha maskaxda ee bini-aadanka ah, oo siinaya xeelado cusub oo lagu daaweynayo cudurada maskaxda iyo cudurrada maskaxda.
Samuel S.-H. Wang, Ph.D., Associate Professor of Biology Molecular, Jaamacadda Princeton
Ku baddalidda Xuduudaha Isku-dhafka ee Calaamadaha Calcium
Baruuraha dareeraha leh ee beddela dhalaalahooda marka unugyada maskaxdu ay yihiin kuwo firfircooni ah oo lagu arkayo naqshadeynta naqshadaynta ee hoosta ka xariiqda, xasuusta, iyo hababka kale ee garashada. Qaybo ka mid ah borotiinnadaas ayaa ka jawaab celiya oo kaliya, marka loo eego saacadaha labaad ama ka badan. Shaybaadhka Dr. Wang wuxuu dib u casriyeynayaa borotiinkan si uu uga jawaabo si dhakhso ah iyo waxqabadyo balaaran. Isku daridda hababka casriga ah, horumarka noocan ahi wuxuu u oggolaan doonaa qaybo yar oo ah unugyada maskaxda si loo eego qaabka sawirada fMRI ay maskaxda ku hayso maskaxda oo dhan - oo leh faaiido cusub oo awood u siinaysa cilmi-baarayaasha in ay arkaan unugyo halbeegyo iyo is-beddelo ku dhaca miisaaniyadaha. Daraasadani waxay qayb ka tahay dadaal ballaaran oo ay sameeyaan dadka neurosuuska ah si ay u horumariyaan teknoolojiyada si ay u bartaan shabakadaha maskaxda inta ay xayawaanku bartaan, ama ay u arkaan waxa khaladka ku dhaca xayawaanka qaba cilladaha nairolojiga.
Horumarinta Biosensors ee Saxarada Lipids
Isbedelada naasaha xuubka ayaa kaalin ka qaadaya calaamadaha maqaarka, laakiin cilmi-baarayaashu wali si kalsooni la'aan ah looma socon karo wax soo saarka lipid. Bajjalieh wuxuu qorsheynayaa inuu abuuro dareemayaasha si uu ula socdo jiilka lipids signaling ee unugyada waqtiga dhabta ah. Waxay ka farsameyneysaa borotiinka oo isku xira laba lipids signaling marka maqnaanshaha calaamadaha kale oo isticmaalaan si ay u sameeyaan tijaabooyin fluorescent si ay ula socdaan meesha ay ku jirto dufankan. Macluumaadkani wuxuu suurtagal noqon doonaa in la kordhiyo habka lipids kale.
Guuleynta Feng, Ph.D., Professor of Sayniska iyo Cognitive Sciences, Machadka Machadka ee Cilmi-baarista Maskaxda, Machadka Massachusetts ee Teknoolajiyadda
Horumarinta Qalabka Molecular, ee qalab lagu aamuso oo loogu talagalay Isku-duwidda Cilmi-nafsiga ee Micro-Xakameynta Habdhaqanka Xakameysan ee Isticmaalka Xakamaynta Xakamaynta Nashaadka iyo Nalka
Si aad waxbadan u baratid sida maskaxda loo hirgeliyo macluumaadka, Feng wuxuu kobcinayaa qalab lagu qaado dadweynaha qanjidhada gaarka ah ee dhaqdhaqaaqa xayawaanka ku jira ee muddo gaaban oo lagu qeexay iftiinka iftiinka, iyo dooro unugyada maskaxda ee isbeddelidda hidda-socodka iyada oo ku saleysan dhaqdhaqaaqaas. Markaa unugyadaasi waa la baari karaa si ay u qiimeeyaan ka qayb qaadashadooda habdhaqanka. Haddii uu guuleysto, qalabku wuxuu u suurtogelin doonaa neuroshoistayaasha in ay si isdaba-joog ah u bedelaan koox kasta oo neuranno u dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa gaar ah mudo go'an ah.
Feng Zhang, Ph.D., Baadhaha, Machadka McGovern ee Cilmi-baarista Maskaxda; Xubin Core, Machadka Broad of MIT iyo Harvard; Kaaliyaha Professor of Brain and Cognitive Sciences, Machadka Massachusetts ee Teknoolajiyada
Caadi ahaan Genome Engineering oo Isticmaalaya Isticmaalayaasha TALSANAANKA Dhiiragelinta Dib-u-habeynta
Hadalka genain ayaa badanaa loo isticmaalaa si loo ogaado nooca neuron, laakiin manipulation caadiga ah ee waxtarka leh waa wax aan baaxad lahayn oo badanaa ku kooban jiirka. Zhang wuxuu ka shaqeynayaa habka wax looga bedelo genome ee neur-mareenka iyadoo la adeegsanayo hiddo-wade (genes) oo lagu soo bandhigi karo unugyo gaar ah iyo wareegyo maskaxeed. Tiknoolajiyadaani waxay u oggolaanaysaa isku-baddelka aadanaha in lagu soo bandhigo moodooyinka xayawaanka si loo ogaado in isku-baddellooyinka hidde-keena ay keenaan cudur Tiknoolojiga ayaa sidoo kale soo gaabin doona waqtiga uu qaadanayo si loo abuuro qaab xayawaan ah.
Michael Berry II, Ph.D., Associate Professor of Biology Molecular, Jaamacadda Princeton
Isku-darka mashiinka dhejiska ah
Shaybaarka Berry wuxuu horumarin doonaa microfabe oo ah microfabe oo micnaheedu yahay tijaabooyin cusub oo aan suurtagal ahayn oo leh muraayadaha muraayadaha caadiga ah ee muraayadda, sida awoodda si sahlan loogu xakameyn karo bey'adda kiimikada ee qanjidhada si degdeg ah leh. Qalabka ayaa sidoo kale noqon doona mid lagu kalsoonaan karo oo sahlan in la isticmaalo marka loo eego mareegaha hadda jira, in la badbaadiyo waqti weyn iyo dadaal.
Robert Kennedy, Ph.D., Hobart H. Willard Professor of Chemistry & Professor of Pharmacology, Jaamacadda Michigan
La socoshada jilicsanaanta neurotransmitters ee qiyaasta qiyaasta sarreeya iyo waqtiga fog
Si loo qiyaaso neurotransmitters in vivo xallinta qiyaasta sare iyo ta waqtiga dheer, shaybaarka Kennedy ayaa kobcinaya baadhitaan la yareeyey kaas oo gaari kara meel kasta oo maskaxda ah ee jiirka ah si loo sameeyo shay-yada yar si loo baadho marxalado badan. Tiknoolajiyadaan waxay bixisaa horumar weyn oo loogu talagalay neuroscience, sababtoo ah shaqo badan oo hidde ah iyo noocyo badan oo cudurka ayaa ku saleysan jiirka.
Timothy Ryan, Ph.D., Professor Biochemistry, Kuliyadda Caafimaadka ee Weill Cornell
Horumarinta wariye ATP
Ryan's laboratory wuxuu soo saaraa habab sax ah oo lagu cabbiro qiyaasta ATP ee qaybo gaar ah oo dhexdhexaad ah iyo helitaanka macluumaad firfircoon ee kormeerka heerarka ATP inta lagu jiro isgaadhsiinta joogtada ah. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la go'aamiyo haddii isku dheelitir la'aanta tamarta ay ka muuqato cudurrada kala duwan iyo sida sahayda ATP sida caadiga ah loo xakameeyo marxaladaha.
W. Daniel Tracey, Ph.D., Professor of Anesthesiology, Biology iyo Neurobiology, Xarunta Caafimaadka Jaamacadda Duke
Cudurka dabiiciga ah ee loo yaqaan 'genevically encodeded' si loogu shaqeeyo khariidadda 'neuronal con'neceyb
Sheyga Tracey wuxuu horumarinayaa habka muujinta hidda-caleenta fayraska ah si uu u sahamiyo xawaaraha neerfaha ee miro-khudradda. Hadafku waa in la isticmaalo si loo xakameeyo unugyada dareemayaasha, raad raaco isku xirnaanta iyo wax ka qabashada waxqabadka dhexdhexaadiyeyaasha isku xiran. Haddii tani ay ku guuleysato duqsiyada miraha, Tracey wuxuu rajeynayaa in farsamooyinka la mid ah ay faa'iido u yeelan doonaan daraasadaha mujtamaca naasaha.
Joseph Fetcho, Ph.D., Professor of Neurobiology iyo Habdhaqanka, Jaamacadda Cornell
Khariidadaha isku xirnaanta xiriirka synaptic ee vivo
Ma jiro hab sahlan oo lagu muujiyo dhammaan unugyada dareemayaasha ee isku xira unug kale marka ay unugyadaas nool yihiin. La shaqeynta Zebrafish, Fetcho waxay soo jeedineysaa in la isticmaalo hababka la yiraahdo indhaha, taas oo dhammaan dhammaan nuucyada ku xiran unugyada dareemayaasha gaar ah waxay noqon doonaan midab, si ay u muujiyaan qaabka xadhigga nidaamka dareenka ee joogtada ah. Ugu dambeyn, habka noocan oo kale ah ayaa kaa caawin karta muujinta qaababka xiritaanka ee hoos yimaada dhaqdhaqaaqa iyo dabeecadaha kale.
Pavel Osten, MD, Ph.D., Aasaasaha hormariyaha Neuroscience, Cold Labor Harbor Cold
Anatomy-ka-sare-u-qaadista farsamada-maskaxda ee maskaxda fareebka
Mashruuca Osten wuxuu raadinayaa inuu caawiyo farqiga farqiga u dhexeeya daraasadda shaqooyinka maskaxda iyo unugyada maskaxda iyo daraasadda maskaxda oo dhan. Isticmaalka tiknoolojiyada sawirada sawirada, wuxuu diiradda saarayaa isbeddelka isbeddelka wareegyada neuralka ee jiirarka oo qaadaya isku-baddelka hidde-abuurka ee la xidhiidha autism iyo schizophrenia. Waxa uu rajeynayaa in tiknoolajigu uu si dhakhso ah, hab sax ah u bixinayo barashada qaabab badan oo hidaha ah si loo fahmo cudurro bani'aadamnimo oo bini aadantinnimo ah.
Thomas Otis, Ph.D., Professor of Neurobiology, Geffen School of Medicine, Jaamacadda California, Los Angeles
Horumarinta hababka la yiraahdo indho-indheynta si loo kormeero tamarta ee kooxo ka mid ah neuroanatomically loo yaqaan qanjirka
Otis iyo asxaabtiisa, oo ay ku jiraan baare ku-xigeenka Julio Vergara, ayaa soo saartay tiknoolaji dareensiis ah oo u oggolaanaya dareemayaasha dareemada in lagu cabirayo fidnada sare iyada oo la adeegsanayo hababka casriga ah. Ujeedada deeqda ayaa ah in la dhiso habka muuqaalkeeda ah si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa maskaxda ee qanjirro badan oo isku mar ah.
Larry J. Young, Ph.D., William P. Timmie oo ah borofisar cilmiga maskaxda iyo dabeecadda maskaxda iyo madaxa, Xarunta Nuuraanta Dabeecadda, Xarunta Qaranka ee Cilmi-baarista Qaranka ee Yerkes
Horumarinta tiknoolajiyada transgenic ee feeraha feeraha si loo naqshadeeyo hidaha iyo qalabka neerfaha ee xiriirka bulshada
Baaritaanka dabeecadaha bulsheed ee culus, sida naas-nuujinta iyo xariirinta bulshada, waxay ku xaddidan tahay in lagu dhibaateeyo muujinta hiddaha si ay u bartaan sida gen genes ay u dhaqmaan habdhaqanka bulshada. Yoolku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu abuuro is-goysyada transgenic prairie, kuwaas oo ah bulsho aad u sareysa, oo tilmaamaya gen ee mas'uulka ka ah kala duwanaanta shakhsiyeed ee dhaqanka bulshada. Cilmi-baadhistu waxay si gaar ah ugu tiirsan tahay dhibaatooyinka sida autismka iyo shisoofrani.
Henry Lester, Ph.D., Machadka Teknolojiyada ee California
Lester wuxuu isticmaali doonaa kanaalka iyio qashin-qaadayaasha si uu u yeesho aragtida sida qanjirrada ku xiran yahay wareegyada iyo sida habdhaqanka xakamaynta noocaan ah. Wuxuu farsameyn doonaa kanaaladaha cusub ee qaabilsan qaabka loo yaqaan 'receptor' ee ka jawaab celiya kaliya daroogo, ivermectin, kaasoo lagu siin karo cuntada xoolaha. Marka qalliinkaas la sameeyo, waxaa suurtagal ah in la barto sida loo dhaqaajiyo ama loo joojiyo nuuroonayaasha u dooda habdhaqanka.
Charles M. Lieber, Ph.D., Jaamacadda Harvard
Nanoelectronic Device Arrays ee Qaabdhismeedka Korantada iyo Kiimikada ee Nervous Networks
Lieber waxay qorsheyneysaa in ay horumariso oo ay soo bandhigto qalabka nanotechnology ee cusub ee qalabka korontada ku shaqeynaya si loo cabbiro calaamadaha korontada iyo biochemical ee miisaanka dabiiciga ah, iyadoo la isticmaalayo shaybaarka ka jira shabakadaha maskaxda ee maskaxda illaa unugyada maskaxda. Waqtiga fog, qalabkaan waxaa loo isticmaali karaa inay noqdaan is-dhexgalo awood leh oo cusub oo u dhexeeya maskaxda iyo qalabka neerfaha ee cilmi-baarista noolaha iyo, ugu dambaynta, daaweynta.
Fernando Nottebohm Ph.D., Jaamacadda Rockefeller
Horumarinta Tikniko loogu talagalay Sameynta Nolol-Xumada Transgenic
Daraasadda barashada maqalka ee gabayada qorraxdu waxay bixisaa hab aad u wanaagsan oo lagu ogaanayo sida xusuusada loo kaydiyo maskaxda adag iyo sida ay u waxyeeleeyeen nidaamka neerfaha dhexe ee lagu hagaajin karo bedelka neuronal. Nottebohm wuxuu doonayaa in uu abuuro nidaam si wax soo saarka waxtarka leh ee loo yaqaan "transgenic songbirds" si loo tijaabiyo ka qayb qaadashada naadiyada shakhsiga ah ee laga yaabo in ay bartaan iyo hagaajinta maskaxda.
Dalibor Sames, Ph.D., iyo David Sulzer, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Horumarinta Fluorescent False Necotransmitterers: Noocyada Cusub ee Si toos ah u Muuqaal ah Xayiraadda Xayawaanka Nurotransmitter-ka Qalabaynta Shakhsiyadeed
Sames iyo Sulzer waxay sameeyeen Fluorescent False Neurotransmitters (FFN) kuwaas oo u shaqeeya sida raadiyaha muraayadaha ah ee dopamine waxayna u suurtageliyaan habka ugu horreeya ee indhaha lagu daaweyn karo neurotransmission sawirada shakhsi ahaaneed. Codsiyada FFNs, Sames iyo Sulzer waxay horumarin doonaan habab cusub oo sahlan oo lagu baaro isbeddelka isbedelka la xidhiidha barashada iyo sidoo kale hababka neefsiga ee la xariira dhibaatooyinka neerfaha iyo xanuunka dhimirka sida cudurka Parkinson ee cudurada iyo shisoofrani.
Paul Brehm, Ph.D., Jaamacadda Caafimaadka iyo Cilmiga Oregon
Cunnoloojiyada cagaaran ee cagaaran oo laga helo echinoderms ayaa bixisa rikoodh dheer oo ku saabsan waxqabadka shabakada nayroolka
Brehm waxay raadineysaa hab cusub oo lagu sawirayo dhaqdhaqaaqa gacanta oo ku jira unugyada caafimaadka qaba iyo bukaanka. Waxa uu soo jeedinayaa wax ka bedelaya borotiinka cagaaran ee jellyfish - bioluminescent brittlestar Ophiopsila, kuwaas oo dhererka dheer ee ku jira unugyada dareemayaasha waxay ku siin karaan taariikh dheer oo ka mid ah dhaqdhaqaaqooda gacanta.
Timothy Holy, Ph.D., Jaamacadda Washington University School of Medicine
Muuqaalka sare ee saddex-cabbirka sawir-qaadashada naqshadaha nudaha ee nudaha
Quduuska ah wuxuu horumariyaa hababka sawir-qaadashada si loo duubo isla mar ahaantana ka soo jeeda dad badan oo weyn oo nuuroon ah adoo isticmaalaya xaashiyo khafiif ah oo si dhakhso ah ugu baaraya unugyada maskaxda saddexda cabbir. Haddii lagu guuleysto, daraasadda ayaa laga yaabaa inay caawiso saynisyahannadu waxay ilaaliyaan aqoonsiga qaabka iyo barashada heerarka gacanta.
Krishna Shenoy, Ph.D., Jaamacadda Stanford
HermesC: Nidaamka duubista neerfaha ee joogtada ah ee si xor ah u dhaqmeysa macaamiisha
Shaybaarka shaybaarku wuxuu isku dayayaa in uu wax badan ka barto sida loo yaqaan 'neurons' ayadoo la sameynaayo qaab maskaxeed, gaaban, tiknoolajiyo tayo sare leh oo loogu talagalay isticmaalka daanyeerada ku saabsan dhaqdhaqaaqooda maalin kasta. Haddii lagu guuleysto, shaqadani waxay abuuri doontaa qalab duubis ah oo soo jiidan kara dareemayaasha shakhsiga ah ee ku dhaqanka daan-hayaha maalmo iyo toddobaadyo.
Gina Turrigiano, Ph.D., Jaamacadda Brandeis
Maareynta booska borotiinka synaptic iyadoo la isticmaalayo fluorescence cryo-microscopy
Turrigiano iyo iskaashigeeda, David DeRosier, Ph.D., ayaa horumarin doona qalab si loo soo ogaado sida borotiinka loo yaqaan 'synaptic proteins' loogu diyaariyo mashiinno molecular taas oo abuuri karta xusuusta iyo garashada garashada. Haddii tani ay cadeyso guul, waxay ugu dambeyntii awood u yeelan doonaan in ay go'aamiyaan sida isku-imaatinadu u noqdaan kuwo laga takooro gobolada cudurka.
Pamela M. England, Ph.D.,Jaamacadda California ee San Francisco
La socoshada AMPA Gaadiidka Gaadiidka ee waqtiga dhabta ah
Kaamka Ingriiska wuxuu horumarin doonaa qalab cusub oo ah qalabka molecular, oo ku saleysan derajooyinka deriska ah ee philanthotoxin, taas oo loo isticmaali karo in lagu barto ka ganacsiga dusha sare ee AMPA subtype of glutamate reseptor. Hadafku waa in la soo saaro noocyada sunta ah ee sunta ah ee soo saara AMPA duubayaasha oo leh sheyada hoose ee gaarka ah, sidaas oo ay u suurtageli karto baadhitaanka farmashiyaha ee kaalinta noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee AMPA qabtayaasha ee niyaanka nool.
Alan Jasanoff, Ph.D., Machadka Farsamada ee Massachusetts
Heerka-Heerka Qalitaanka ee MRI oo leh Hay'adaha Calcium Imaging
Jasanoff wuxuu sahmin doonaa habka cusub ee farsamada Magnetic Resonance Imaging (fMRI), oo lagu sameeyay shaybaarkiisa, oo ku salaysan nuucyada birta ah ee oksaydhka oo soo saara sawirka sawirka marka la isku daro. Haddii lagu guuleysto, habka cusubi wuxuu noqon doonaa qiyaas toos ah oo ah hawlaha neuralka, oo leh kartida hagaajinta xalka iyo fogaanta ee fMRI.
Richard J. Krauzlis, Ph.D., iyo Edward M. Callaway, Ph.D., Machadka Salk ee Daraasaadka Biyolojiga
Isticmaalidda Viral Vectors si loogu baaro Dareemaha-Mashiinka Mashiinka ah ee Dabeecadaha aan caadiga ahayn ee aadanaha
Krauzlis iyo Callaway waxay hormarin doonaan habka looga hortagi karo subopopulations gaar ah oo ku saabsan gobollada xaafadaha koofurta maskaxda. Haddii ay ku guuleystaan, habkoodu wuxuu bixinayaa hab lagu qiimeynayo sida farqiga qaaska ah ee nudaha ee gobollada kala duwan ee maskaxda ay u shaqeeyaan xiniinyaha si ay ugu suura galiyaan hawlaha maskaxda sare, sida garashada, xasuusta, xakamaynta iyo xakamaynta maskaxda.
Diiwaan gelinta wireless ee tareenada badan ee neerfaha ee xayawaannada xorta ah
Meister iyo wada shaqeeyayaashiisa, Alan Litke oo ka tirsan Jaamacada California, Santa Cruz, iyo Athanassios Siapas oo ka tirsan Caltech, ayaa najixi doona nidaam iskudhaf ah oo dhexdhexaad ah oo u oggolaanaya in duubista calaamadaha korontada ku shaqeeya ay ka soo baxaan xayawaanka si xor ah oo aan xadhig lahayn. Isku-dubaridda teknooloojiyada loogu talagalay yareeynta iyo alaabooyinka fudud, nidaamkani waa inuu fududeeyaa qiyaasta habdhiska maskaxda inta lagu jiro dabeecadaha dhabta ah ee dabiiciga ah, sida kicinta, fuulitaanka ama duulaya.
Karl Deisseroth, MD, Ph.D., Jaamacadda Stanford
Xakameyn la'aan, Xakamaynta Xalinta Khatarta ah ee Hawlgabka Nalalka ah ee Isticmaalidda Ion Channel-Sensitive Channel oo ka yimid Alga C. Reinhardtii
Shaybaarka Deisseroth, oo ay ku jiraan wada shaqeeyaha horay u shaqeeya ee Edward Boyden, wuxuu horumarin doonaa qalab cusub, oo ku saleysan caleenta xasaasiga ah ee iftiinka ah ee laga helo algae, si loo kiciyo dhaqdhaqaaqa korantada ee nalalka gaarka ah ee nuurooyinka leh iftiinka. Hadafkoodu waa inuu kicin karo kartida waxqabadka shakhsiyadeed ee leh waqtiga saxda ah ee miisaaniyada iyo in la xakameeyo waxa neurannadu ku kiciyaan isticmaalka hababka hidde-gelyada si loo yareeyo muujinta borotiinka.
Samie R. Jaffrey, MD, Ph.D., Weill Medical College, Jaamacadda Cornell
Raajo-sawiridda RNA ee Nuurooyinka Nololeed ee Isticmaalida Maadooyinka Cunuga ee Xaaladaha Caadi ah
Shaybaarka Jaffrey wuxuu sii horumarin doonaa nidaam si loo helo sawirada RNA iyadoo la adeegsanayo fareebka fluorescence microscopy. Farsamadiisa wuxuu ku salaysan yahay dhismaha hababka RNA ee gaaban oo isku xidhan leh fluorophore iyo si weyn u kordhiya soo daadinta iftiinka. Fluorophore waxaa laga soo qaatay tan loo isticmaalo Green Fluorescent Protein (GFP). Hadafku waa in la baddalo daraasadda RNA si la mid ah sida Tiknoolijiyada GFP ay u beddeleen muuqaalka borotiinka.
Jeff W. Lichtman, MD, Ph.D., Jaamacadda Harvard Kenneth Hayworth, Howard Hughes Medical Institute ee Xarunta cilmi-baarista ee Janelia
Horumarinta Qalabka Lathe-Ultramicrotome-ga ah ee loogu talagalay dib-u-dhiska maskaxda
Hayworth iyo Lichtman waxay kobcinayaan qalab yar oo si toos ah u ururiya kumanaan qaybood oo unugyo ah oo sawir leh iyadoo la isticmaalayo qalabka loo yaqaan "electroscopy of electrocardiograms" (TEM). Dib-u-dhiska qaybta qaybta ee TEM waa teknoolajiyadda kaliya ee la xaqiijiyey in ay kaqeyb qaadanayaan, heerka ugu fiican ee xallinta, isku-xirnaanta saxda ah ee dhammaan nuucyada gudaha mugga maskaxda maskaxda. Laakiin codsigu wuu xadidan yahay sababta oo ah qeybaha ultrathin waa in la soo ururiyaa gacanta. Qalabkani wuxuu nadiifin doonaa geedi socodka, samaynta qaybta qaybta ah ee la heli karo ee shaybaarro badan iyo faa'iido badan oo ku saabsan mugga unugyada.
Alice Y. Ting, Ph.D., Machadka Farsamada ee Massachusetts
Sawiridda Qalabka Nuclearka ee Kansarka Taraafikada Taraafikada iyo Cudurka Microscopy Isticmaalka Biotin Ligase Labeling
Ting waxay soo jeedinaysaa tiknoolajin la hagaajiyey si loo arko looguna qiimeeyo xatooyada xayiraadda borotiinka. Waxay soo saartey farsamooyin calaamadeyn ah oo ku saleysan farsamada casriga ah taas oo kala soocaysa maaddooyinka ku jira maaddooyinka neuronka ka hor intaan la kicin kuwa ka soo baxa kicinta. Qaybinta miisaanka loo yaqaano molecules oo la calaamadiyey ayaa markaa lagu arki karaa sawir-muuqaal-arag ah iyo, waxoogaa isbedel ah, ayaa sidoo kale lagu arki karaa xajmiga sare ee korontada "electroscopy".
EJ Chichilnisky, Ph.D., Machadka Salk
AM Litke, Ph.D., Machadka Santa Cruz ee Fikradda Qaybaha
Chichilnisky, nurobiologist, iyo Litke, oo ah ficicist physicist, ayaa iska kaashanaya tiknoolajiyada si ay u qoraan una dhiirigeliyaan dhaqdhaqaaqa korantada ee boqollaal nuroniyadeed waqti wakhti ah oo qiyaasta miisaanka iyo miisaanka. Kani wuxuu awood u siin doonaa inay bartaan sida dadku u badan yihiin ee nidaamka neuraha iyo codsiyada macluumaadka si loo xakameeyo garashada iyo dhaqanka. Waxay marka hore qorsheeyaan in ay bartaan retina, iyo sidoo kale, nidaamyada kale ee sanka.
Daniel T. Chiu, Ph.D., Jaamacadda Washington
Xilliga Qaadashada iyo Ku-Xigta ee Xil-dhibaan ee Stimuli-Unugyada Unugyada
Nanokapsules waa mid aad u yar oo "moos ah" oo ku jiri kara wax daqiiqad ah maadada oo u keenaya bartilmaameed loo doortay. Chiu waxay kobcineysaa oo ay hagaajinaysaa noocyada cusub ee nanokapsules iyo dib-u-eegista kuwa hadda jira si ay u bartaan sida unugyada hal-hal-xuubka ahi ay soo saartaan astaamaha dusha maskaxda. Nanokapsules waxay faa'iido u yeelanaysaa in la sawiray borotiinada dusha sare ee unugyada iyo baaritaanka sida rayshiyeyaashu u diraan calaamadaha iyo kicinta gudbinta synaptic.
Susan L. Lindquist, Ph.D., Machadka Whitehead ee Daraasada Biomedical
Horumarinta iyo Isticmaalka Noocyada Moodhalka Moodooyinka ee Cudurrada Neurodegenerative iyo Baaritaanka Xoogga
Lindquist wuxuu soo jeedinayaa inuu baaro cudurada neurodegener by by studying jeexista hilibka doofaarka. Sababtoo ah guusha weyn ee uu shaybaarku wuxuu isticmaalay khamiir asaga oo ah nidaam tijaabo ah oo lagu baranayo cudurka Parkinson, waxay qorsheyneysaa in ay kordhiso nooca labo nooc oo cudur ah -kaaliyeyaasha ah (oo ay ku jiraan Alzheimers) iyo spinocerebeller ataxia-3.
Daniel L. Minor, Jr., Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco
Kala soocisga Horumarinta Ion Channel Modülators oo ka yimid maktabadaha dabiiciga ah iyo qaabaynta
Dhallinyaradu waxay ka shaqeynayaan hab cusub oo lagu aqoonsado meco-geliyeyaasha oo xannibaya ama furi doona kanaalka ion, borotiinka furaha ah ee furaha korontada maskaxda. Wuxuu baran doonaa jimicsiyada dabiiciga ah ee ka soo jeeda jilicsanaanta jilicsan wuxuuna sameyn doonaa meco-molecules-like to test. Abuuritaanka maadi-yare ee dabiiciga ah ku sameeya dabeecadda iyo iyaga oo si ballaaran u helaya waxay dardar galinayaan raadinta daroogooyinka kuwaas oo u dhaqmi kara kanaalada gaarka ah.
Stephen J. Smith, Ph.D., Jaamacadda Stanford University School of Medicine
Hababka loogu talagalay Xeeldheerida Xidhiidhka Maskaxda oo ay soo saarto Xidhiidhinta Seri-qaybinta Soodhawaynta Electron Microscopy
Smith wuxuu ujeedadiisu tahay inuu abuuro qalabka neuroscience si uu uga faa'iidaysto waxa uu ugu yeerayo mikroskoobka qarniga 21aad, oo uu soo saaray iskudubaridiisa, Winfried Denk, Ph.D., biophysicist at Mach Planck Institute. Waxay horumarinayaan hababka Serial-Section Scanning Electron Microscopy (S3EM) ee, markii ugu horreysay, waxay bixin doontaa awoodda lagu falanqeynayo wareegyada maskaxda ee dhamaystiran faahfaahin daqiiqo. Smith wuxuu horumariyaa siyaabo lagu dhejiyo unugyada maskaxda si loo falanqeeyo la socoshada microscope, iyo qalab xisaabeed si loo falanqeeyo mug weyn oo xogta farsamooyinka cusubi soo saari doono.
Stuart Firestein, Ph.D., Jaamacadda Columbia
Qalabka Farsameed ee Aqoonsiga ee Farsameedka Hirgelinta Fudud (Membrane Voltage)
Firestein iyo iskaashigeeda, Josef Lazar, Ph.D., waxay soo jeedinaysaa in ay tijaabiso nooc cusub oo ah borotiinka dareemaya xasaasiyadda tamarta oo laga yaabo inuu soo saaro dhacdooyin koronto oo aad u yar iyo in la arko isbeddelada isbeddelka ee unugyo tiro badan oo isku mar ah. Tani waxay kor u qaadi doontaa heerka baadhitaanka xogta macluumaadka ee maskaxda ee haatan ka baxsan.
David Heeger, Ph.D., Jaamacadda New York
Heeger iyo iskaashigeeda, Souheil Inati, Ph.D., iyo aqoonyahanka jaamacada Stanford John Pauly iyo David Ress, ayaa qorshaynaya in ay qaataan hab cusub oo lagu hagaajinayo xalka qallafsan ee sawirka maskaxeed (magnetic resonance imaging) (fMRI) si ay ugu suura galiso inuu si joogto ah u helo macluumaadka fMRI xalka ugu sarreeya. Kooxdu waxay ujeedadeedu tahay inay caawiso xalinta dhibaatooyinka aasaasiga ah ee MRI caadiga ah.
Paul Slesinger, Ph.D., Mount Sinai / Icahn School of Medicine
G Galka Nadiifinta Tamarta Qaadashada (GRET) Nidaamka Kormeerka Kala-wareegga Is-beddelista ee Neurons
Is-beddelka is-gaarsiinta unugyada unugyada ayaa dhacaya marka neurotransmitters kiimikada ay ku xidhan yihiin noocyo gaar ah oo ah qaababka qanjidhada 'protein-G' ee la yiraahdo neurotransmitter-ka (GPCR), markaa, waxay u hawlgeliyaan borotiinka G. Si loo barbardhigo isbeddellada firfircoon ee hawlaha borotiinka ee xilliga firaaqada unugyada, Slesinger wuxuu soo jeedinayaa in uu hormariyo borotiin ku salaysan borotiinka gaaska borotiinka ee ku saleysan hantida qalabka korantada (fluorescence) ee tamarta tamarta (FRET).
Bernardo Sabatini, MD, Ph.D., Harvard Medical School
Qalabka Farsamada ee Falanqaynta Tarjumaadda Protein ee Qaybaha Jirro Xanuunka ah
Si aad u ogaatid sida qanjidhada udub dhexaadiyo iyo sida maskaxdu u dukaamayso oo dib ugu soo celiso macluumaadka, Sabatini waxay horumarineysaa maaddooyinka ku dhaliya iftiinka marka nuuroonku sameeyaan borotiinka, iyo mikroskoob si loo eego habka qoto dheer ee maskaxda nool.
Karel Svoboda, Ph.D., Khamriga Xeebta Cold
Xeerka Isgaadhsiinta Isku-dhafka ee kudhaca jinsiga ah ee leh Saamayn Qaran iyo Mabda-ahaaneed
Svoboda waxay horumarinaysaa qalabka molecular si loo sii fahmo sida looxaagu u habeeyo wareegga maskaxda.
Liqun Luo, Ph.D., Jaamacadda Stanford
Xayeysiinta Sixirsan ee Kaluunka ah iyo Isku-duwidda Hiddaha
Luo wuxuu ka shaqeynayaa habka hidde-galka si loo xakameeyo oo loo raadiyo jadeecada hal jilibka ee jiirarka si loo barto sida shabakadaha neerfayaasha loo soo ururiyo inta lagu jiro horumarinta kadibna wax laga beddelo waaya-aragnimadooda.
A. David Redish, Ph.D .; Babak Ziaie, Ph.D.; iyo Arthur G. Erdman, Ph.D., Jaamacadda Minnesota
Diiwaangelinta Wireless ee Norriska Abuurka ee Awake, Jiir Aqoonta
Wadashaqeynayaasha - neuroscientist, injineernimada korantada, iyo injineer farsamo - waxay horumarinayaan habka khadadka ah ee lagu duubo tareenada miyir-qabadka ee ka soo baxa soojiidashada, dhaqanka jiirka si kor loogu qaado fahamka barashada iyo dhaqanka.
Helen M. Blau, Ph.D., Jaamacadda Stanford
Nadaafad Gaar ah, Nidaaminta Gene ee Habka Nidaamka Nervous System
Shaybaarka Blau ayaa baaraya habka cusub ee keena jeermiska daaweynta habka dhexe ee dareenka, iyada oo la isticmaalayo unugyada lafta lafta oo lagu mideeyo hiddaha awood u leh bar-tilmaameedka cudurka.
Graham CR Ellis-Davies, Ph.D., MCP Hahnemann University
Muuqaal Sawireed ee Nuororeceptors ee Xanuunada Maskaxda ee Laba Lafo-sawir leh Qaadista Neurotransmitters
Ellis-Davies waxay sameysey habab cusub oo lagu sawirayo qaababka waxqabadka maskaxda ee aan horay loo arag, iyagoo sameeynaya nooc ah neurotransmitters oo wali ku jira hab nololeed illaa illaa firfircooni leh iftiin adag oo iftiimiyay.
Dwayne Godwin, Ph.D., Jaamacadda Wake Forest ee Daawada Daawada
Soo bandhigida Xidhiidhka Xirfadaha Shaqada leh Viral DNA
Marka la isku duro unugyada viral DNA, oo si khatar ah u calaamadeynaya fayraska, iyo raadinta faafitaanka unugyada la isku xidhan yahay, Godwin wuxuu raadiyaa siyaabo cusub oo loo muujiyo sida unugyada dareemayaasha ee maskaxdu u diraan oo ay helaan farriimaha.
Seong-K Kim, Ph.D., Jaamacadda Minnesota Medical School
Horumarinta farsamada -FMRI-ku-xalinta khilaafka-ku salaysan ee Vivo In Vivo
Kim wuxuu ka shaqeynayaa inuu kor u qaado awooda sawir-maskaxeed ee maskaxeed si loo barto waxqabadka maskaxda si faahfaahsan.
Stephen Lippard, Ph.D., Machadka Farsamada ee Massachusetts
Chemistry si loo sameeyo horumarinta Zinc Sensors si ay u baaraan Signal Neurochemical
Lippard waxa uu soo saari doonaa dareerayaasha fluorescent-ka ee soo saari doona qanjirrada iyo nitric oxide ee ku jira unugyada nool iyo muujinta qaabkoodii caadiga ahaa.
Partha Mitra, Ph.D., iyo Richard Andersen, Ph.D., California Machadka Teknolojiyada
Horumarinta Tiknoolajiyada Diiwaangelinta iyo Akhriska Kaararka Dadwaynaha Waqtiga dhabta ah laga bilaabo Gobolka Goobta Badbaadinta
Mitra iyo Andersen waxay isticmaalaan farsamooyin xisaabeed si ay u falanqeeyaan waxqabadka uruurinta nuuroonada, iyagoo rajeynaya inay ugu dambeyntii go'aamiyaan xiriirka ka dhaxeeya dhaqdhaqaaqa neefsiga iyo dabeecadda.
William Newsome, Ph.D., iyo Mark Schnitzer, Ph.D., Stanford University School of Medicine
In Vivo Brain Dynamics Daraasad la leh Fiber Optics iyo Isku-xirxirashada Fikradaha Tomography
Schnitzer iyo Newsome (oo helay abaalmarin khaas ah, $ 50,000) ayaa waxay baranayaan duruufaha maskaxda iyagoo soo dejiya goobaha kaydinta, khariidaynta qaybaha calaamadaha molecular, iyo kormeerka naqshadaha hawlaha maskaxda iyadoo la adeegsanayo iftiinka.
Timothy Ryan, Ph.D., Weill Medical College ee Jaamacadda Cornell, iyo Gero Miesenböck, Ph.D., Xarunta Kansarka Xarunta Kansarka Xarunta Kansarka
Naqshadeynta iyo hirgelinta qaabka pH-ku salaysan ee qaabaynta sinjiga
Cilmi-baadhayaashu waxay kobcinayaan tusmooyinka farsamooyinka casriga ah ee waxqabadka astaamaha oo ku salaysan dareenka isbeddelka astaamaha.
In Vivo μMR Sawiridda Socdaalka Xanuunka ah ee Maskaxda Maskaxda
Turnbull wuxuu ka shaqeynayaa qaab cusub oo muuqaal ah oo lagu sawirayo guuritaanka maskaxda ee maskaxda kobcinta, oo ku calaamadeynaysa neur-mareenka cusub iyo raacidda xayawaannada isdaba-joogga ah dhowr cisho oo leh mareegta maan-doorinta.
Michael E. Greenberg, Ph.D., iyo Ricardo E. Dolmetsch, Ph.D., Isbitaalka Carruurta Boston
Teknolojiyada Cusub ee Waxbarashada Ku Meel-Gaarka ah ee Ku-meel-gaadhka ah iyo Maaraynta Khariidadda iyo Tarjumaadaha Nuuriyaadka Dareeriga ah
Cilmi-baadhayaashu waxay horumarinayaan hab lagu fiiriyo dhaqdhaqaaqa hiddaha ee unugyada dareemayaasha nool, iyadoo la adeegsanayo qalabka xajmiga iyo baaritaanka fluorescence, si loo arko sida unugyada kale u saameeyaan.
Paul W. Glimcher, Ph.D., Jaamacadda New York
Daraasada Glimcher waxay sahamisaa ultrasound ogaanshaha si loo suurtageliyo meeleynta saxda ah ee duubista electrodes ee maskaxda ee soo jeedda, asal u noqda firfircoon.
Leslie C. Griffith, MD, Ph.D., iyo Jeffrey C. Hall, Ph.D., Jaamacadda Brandeis
Sensors Transduction Sensors
Griffith iyo Hall waxay kobcinayaan dareemayaasha hidaha ee lagu geyn karo unugyada dareemayaasha shakhsiga ee duqsiyada nool, si ay u go'aamiyaan marka unug lagu qoro si ay u gutaan doorka habdhaqanka.
Warren S. Warren, Ph.D., Jaamacadda Princeton
Zero Quantum Qalabka Magnetic Resonance Imaging
Qorshaha cad ee Warren wuxuu doonayaa inuu fmRI awood u yeesho, inuu kordho qaraarkiisa in ka badan 100 jeer, taas oo u oggolaaneysa inuu muujiyo meelaha firfircoon ee maskaxda si faahfaahsan oo aad u kala duwan.